ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီယေရှုရဲ့ပြန် | Apg29
အဆိုပါဘုရားကျောင်းသည်ပေါလုကတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုနည်းတူပီတိကိုထင်ရှားကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့။ လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်ဂရိစကားလုံး huvudbetydningen သည်အဘယ်မှာရှိ "Mysterion" ဖြစ်ပါတယ် "လုံးဝအသစ်ဖြစ်၏, အရင်မတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခု။ "
အဆိုပါ Pre-trib များအတွက်တစ်ဦးကကာကွယ်ရေး
E ကို ယုံကြည်သူများ၏ပီတိဖြစ်ပျက်မည်သည့်အခါများစွာသောလူယေရှု၏ပြန်လာစပ်လျဉ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မမေးဎမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်? ကျနော်တို့ပြဿနာအကြောင်းကိုသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောပြုပြင်မှုများစကားပြောရန်: Pre-trib အယူဝါဒ, အလယ်တန်း-trib အယူဝါဒနဲ့ post-trib အယူဝါဒ။ ဒါက Pre-trib အယူဝါဒများအတွက်ကာကွယ်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများ၏ပီတိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမစတင်မှီဖြစ်ပေါ်ဆိုလိုသတည်း။
သခင်ဘုရားကြွလာသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲခြားရမယ်အရာသုံးခုရှိတယ်။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, ဣသရေလအမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသားတို့အဘို့ဘုရားသခငျ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခဏလုပ်အမှားကျနော်တို့ပရိသတ်အဘို့, ဣသရေလအမျိုးအဘို့ဘုရားသခငျသညျရဲ့ကတိများနှင့်အစီအစဉ်များကိုရောမွှေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အသငျးတျောကိုအပြန်အလှန်ဣသရေလအမျိုး၏အရပျကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာမှားကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခငျသညျဣသရလေပြောသောအခါဘုရားသခင့ပရိသတ်တို့အားပြောသောအခါ, ကျနော်တို့ကိုခွဲခြားရပေမည်။
: P အကျင့်တရားနှင့်အချိန်ပေါ်ဣသရေလလူတို့သည်ဘုရားသခငျ့ကယျတငျတျောမူသောအစီအစဉ်၏အထူးသယ်ဆောင်။ GT ကိုရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ခရစ်တော်တည်းဟူသောသခင်ဘုရားကြွလာမည်နှင့်သူ၏နိုင်ငံကို - ထိုချစ်စရာကောင်းတဲ့, ဣသရေလလူမျိုး၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်မည်, ဘယ်မှာဣသရေလအမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားပြည်ကမ္ဘာမြေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာစင်တာ၏ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်မှာကင်းဒမ်း, ကတိပြုခဲ့သည်။
သခင်ဘုရား၏တရားဇိအုန်တောင်ပေါ်ကထဲကထွက် သွား. , ယေရုရှလင်မြို့မှသူ၏စကား, လူအမျိုးမျိုးကစီးဆင်းမည်။ ဖြောင့်မတ်, ငြိမ်းချမ်းရေး, နှင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းထောင်စုနှစ်သောငြိမ်းချမ်းရေး၏ဤနိုငျငံတျော၌, ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးက မေရှိယနိုင်ငံတော်ခံစားရတဲ့နစ်နာမှု၏အကျိုးဆက်ထို့ကြောင့် GT ကိုအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ tt လူမျိုးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားသည်မြေကြီးသို့ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောကိုပေးပို့အသုံးပြုပုံတပါးအမျိုးသားတစ်ဦးကိုအထူးစီမံခန့်ခွဲမှုပြင်ဆင်ခဲ့, အသင်းတော်တည်းဟူသောကျေးဇူးတော်ဘုရားသခငျ့ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား၏ကောငျးကငျကလူကို select နိုင်ဖို့အတွက်ထိုအချိန်ကလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအသငျးတျောကမရှိ, ကိုလည်းအလွန်ယေရှု၏ဒေသနာ၌ကန့်သတ်။
ကျနော်တို့တပါးအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များ၏သူချင်းအမွေခံဖြစ်လာကြပါပြီသောဤအံ့သြဖွယ်လျှို့ဝှက်ချက်, ပထမဦးဆုံးမိမိကိုမိမိသခင်၏တစ်ဦးပေါ်ထွန်းကတယ်သူကိုတမန်တော်ပေါလုကအတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သည်။ (Efe 3: 3-6, ဗိုလ်မှူးကြီး 1: 25-27) ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဘုရားကျောင်းကဒီစီးပွားရေးတွင်ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သစ္စာရှိသော, ပရိသတ်ရဲ့နှလုံး၏အမြဲတမ်း bolig ရှိပြီး, ငါတို့အမွေ uppryckelsens နောက်နေ့၏ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါညီလာခံတွင်အချိန်ကျနော်တို့ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောသညျဘုရားသခငျကိုယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာသိတစ်ခုတည်းသောဗိမာန်တော်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာ နေ. ယူတော်မူကြောင်းကို, အန္တိခရစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောကယ့်ကိုအဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယရှေုခရဗျာဒိတ်ကျမ်း - ဒါဟာမကြာခင်နောင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်
1:19 Up ကို - သငျမွငျပါပွီဘယျသို့စကားလုံးများကိုချခြင်းနှင့်ကားအဘယ်သို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နောကျမှရကြလိမ့်မည်ရေးပါ။
အို Rdet "နောင်" ဂရိစကားလုံးဖြစ်ပါတယ် meta tauta, ဆိုလိုတာက "ဤအမှုအရာအပြီး" ။
သူမမြင်စဖူးဒါက 1. ။ 2. နောကျမှသူဖြစ်ရမည်အဘယ်အရာ 3. ကဘာလဲ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတစ်နည်းတစ်ဦးသုံး shared ဌာနခွဲ။
ခုနှစ်တွင် မျြးအခနျးကွီး 1: 12-16 ယောဟန်သည်မိမိလက်၌ကြယ်ခုနစ်လုံးကို (7 အသင်းတော်နယ်ပယ်ကောင်းကင်တမန်များ) နှင့်အတူရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးကို (7 အသင်းတော်နယ်ပယ်) ၏အလယ်၌ရပ်နေသည်ကိုဘုန်းသညျယရှေုကိုမွငျလြှငျမြင်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ကရာနီ၏ထမြောက်တော်မူသခင်ဘုရားသည်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်သူဘုန်းယရှေု, မြင်သည်။ သူကကြီးမြတ်တရားသူကြီး, ရှင်ဘုရင်နှင့်သခင်တို့၏သခင်၏ရှင်ဘုရင်, သိုးသငယ်အဖြစ်က Man ၏ဘုန်းသည်သားတော်ကိုအဖြစ်သူ့ကိုရှုမြင်ယုဒအမြိုး၏ခြင်္သေ့, အဘယ်သူကို။
: D t ကိုယရှေုသညျ '' ပြန်လာနိုင်ဖို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မွေးဖွားအတွက်, ပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ဇယားအပေါ်အခြေခံပြီး, စည်းဝေးပွဲ urskillnings အချိန်ခြုံငုံသုံးသပ်သည်။ ခေတ်ကာလနဲ့နောပီတိမှတစ်ဆင့်အသငျးတျောကိုနှင့်၎င်း၏ဝိညာဉ်ရေးရာဆင့်ကဲကိုယ်စားပြု7အက္ခရာ။
အသငျးတျောကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကိုယ်စားပြုဧဖက်အသင်းတော်ထံစေလွှတ်တော်မူပထမအက္ခရာ, အမည်ရသည့်တမန်တော်အသက်အရွယ်။ အဆိုပါလောဒိကိအသင်းတော်ထံကိုစေလွှတ်ခုနစ်နောက်ဆုံးအက္ခရာ။ အဆိုပါစာ၌ဖော်ပြထားသောဝိညာဉ်ရေးရာမှောင်မိုက်ကိုယရှေုသညျပြန်မရောက်မီအလွန်နောက်ဆုံးအချိန်ပေါ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လောဒိကိအသင်းတော်ရဲ့အဆုံးအချိန်ဘုရားကျောင်းသော။
3. အဘယျ shell ကိုနောကျမှဖြစ်
အို Rdet "နောင်" ဂရိစကားလုံးဖြစ်ပါတယ် meta tauta, ဆိုလိုတာက "ဤအမှုအရာအပြီး" ။7အက္ခရာမှတဆင့်ပေးအပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းအသက်, ပြီးနောက် ie ဆင့်ကဲ။
4 Rev: 1 - ထိုအခါ (ဆိုလိုသည်မှာမြေကြီးပေါ်ညီလာခံအချိန်ကျော်ဖြစ်ပြီး, သူကခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည့်အခါ), ငါကြည့်လျှင်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, အသေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်, ငါပထမဦးဆုံးကြားဖူးစကားသံကို တံပိုးကဲ့သို့အကြှနျုပျကိုမှစကားပြော က " ဤအရပ်သို့တက်လာ ။ , ငါနောကျမှသူဖြစ်ရမည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြပါလိမ့်မယ်" (အမည်ရ, အသင်းတော်အသက်အရွယ်ပြီးနောက်) တစ်ချိန်က ငါဝိညာဉ်တော်၌ လာ. , ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ရာဇပလ္လင်သည်ကောင်းကင်၌ရပ်နေ၏, တပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်လေ၏။
ဤတွင်ညီလာခံပီတိယောဟနျသလက်ခံရရှိပေါ်ထွန်းတူသော, 1 သက်သာလောနိတ် 4:16 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအားကောင်းတဲ့အသံမြည်ခြင်း, ဘုရားသခင်နှင့်ပီတိ၏ Trump ။ တစ်ဦးကချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြိုင်! ယောဟနျသရာဇပလ္လင်ပတ်လည်မှာ 24 အကွီးအကဲမြားကကိုယ်စားပြုသော raptured ဘုရားကျောင်းတွေ့မြင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားရရှိသွားတဲ့။
ကျနော်တို့ပီတိပြီးနောက်ဖြစ်သောအခန်း4နဲ့5မှာကောင်းကင် "screanshot" ခံယူပေမယ့်မြေကြီးပေါ်မှာဆငျးရဲဒုက်ခမီ။ အခန်း6မှစ. ငါတို့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကျောနေနှင့်ယောဟန်ငှက်ရဲ့မျက်စိအမြင်ဆငျးရဲဒုက်ခအခန်း 6-19 အတွက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ထွက်ကစားမြင်သည်။
ရာဇပလ္လင်ပတ်လည် 24 အကွီးအကဲမြား
T က reviously အသင်းတော်၏ 24 အကွီးအကဲမြားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ထိုပီတိအားဖြင့်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ကိုယ်စားပြုကြောင်းငါ့ကိုပြောဆိုထားသည်။ ကျနော်တို့ညီလာခံမှ 24 အကြီးအကဲများနှင့်ကတိတော်များအကြောင်းကိုများမှာအတူတူပင်သတင်းအချက်အလက်တူတဲ့စတင်နိုင်သည်
ဗြာ4(ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်: 6: 4,11
အဖြူရောင်သင်္ကန်း (4 ဗျာ 4) Have
သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ပန်းဦးရစ်သရဖူကို (ဗြာ 4: 4,10)
ရှငျဘုရငျတို့ (ဗြာဒိတျ 5:10 Is
ယဇ်ပုရောဟိတ် (ဗြာ 5:10)
ရာဇပလ္လင် (မဿဲ 19:28 ဗြာဒိတျ 3:21
အဖြူရောင်အဝတ် (ဗျာဒိတ် 3: 4-5)
ပန်းဦးရစ်သရဖူကို (1 နွားတွေ 9:25, ယာဉ်ကြော 4: 1.2)
လိမ့်မည်ရှငျဘုရငျတို့ (Rev 1: 6, 2:26, ​​20း6)
လိမ့်မည်ယဇ်ပုရောဟိတ် (Rev 20: 6)
ဗြာဒိတျ5ခုနှစ်တွင်: 9, ဒါကြောင့် 24 အကွီးအကဲမြားခရစ်တော်အားအားအသစ်သောသီချင်းကိုနှင့်ယဇ်ပူဇော်သိုးသငယ်ကိုသီခငျြးဆိုပါ:
ကျမ်းပိုဒ်း9ထိုသူတို့ကအသစ်သောသီချင်းကိုသီဆိုခဲ့: "သင်ကွပ်မျက်ကြ၏, ထိုစာလိပ်ကိုယူနှင့်၎င်း၏ဖျံဖွင့်ခံထိုက်ပေ၏, သင်၏အသွေးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်အဘို့ဝယ်ယူ လူတွေ တမျိုးနှင့်ဘာသာစကားနှင့်လူများနှင့်လူမြိုးထဲက။ V.10 ကိုသင်စေပြီ သူတို့ကို ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျဖို့နိုငျငံတျောသညျနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ဖို့, သူတို့ ကိုမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရလိမ့်မည်။ "
S မတိုင်မီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, မူရင်းဂရိကျမ်းကနေဘာသာပြန်ချက်အတွက်အမှားအယွင်းများရှိခဲ့သည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုများအနက်ဂရိစာသားအများစုအပေါ်အခြေခံပြီးတဖန်အစားဤကဲ့သို့သောဘာသာ:
ကျမ်းပိုဒ်9ထိုသူတို့တစ်တွေအသစ်သောသီချင်းကိုသီဆိုခဲ့: "သင်ကွပ်မျက်ကြ၏, ထိုစာလိပ်ကိုယူနှင့်၎င်း၏ဖျံဖွင့်ခံထိုက်ပေ၏, သင်၏အသွေးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတမျိုးနှင့်ဘာသာစကားနှင့်လူများနှင့်လူမြိုးထဲကဘုရားသခငျသညျအဘို့ငါတို့အဘို့အဝယ်ယူခဲ့သည်။ V10 ကိုသင်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အယဇ်ပုရောဟိတ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ, ငါတို့မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရလိမ့်မည်။ "
: D အီး 24 အသက်ကြီးသောသူတို့သည်ယုံကြည်သူများနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်, ဒါမွကွေီးပျေါမှာယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကြသူအပေါငျးတို့သရွေးနှုတ်တော်မူသောလူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများမှကောင်းကင်ပြာ၌ရှိကြ၏ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာပြီးသားကိုစတင်ပါ။
1 ကောရိန်သု 15:51 - ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သင်တို့ကိုငါနက်နဲသောအရာတခုကိုပြောပြ: ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးခဲ့သည့်တံပိုးမှုတ်သောအခါ, မျက်စိတမှိတ်၌, ခဏ၌, ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရကြလိမ့်မည်။
P ကို ကိုအသင်းတော်ရှင်ပေါလုကတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်း recis ဒါကြောင့်လည်းပီတိဖြစ်တယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရှားကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု။ လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်ဂရိစကားလုံး huvudbetydningen သည်အဘယ်မှာရှိ "Mysterion" ဖြစ်ပါတယ် "လုံးဝအသစ်ဖြစ်၏, အရင်မတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခု။ "
ကျနော်တို့အချိန်ပိုအတွက်ပီတိရန်မhäntydningarကိုရှာဖွေ, ထိုသို့ယရှေုသညျပီတိသင်ပေးပေမယ့်ဣသရလာရန်သာသည်သူ၏မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလိုသည်။ ပီတိသည်ပေါလုအားလာမယ့်နက်နဲသောအရာတခုကိုခဲ့ထပ်မံဘုရားသခငျသညျအထံတော်သို့အပ်နှင်းတော်မူကြောင်းကိုပေါ်ထွန်းသဘောဆောငျ။ ပီတိဒုတိယ 1 ကော 15 နှင့်2တွင်ဖော်ပြထား
နှစ်ပေါင်း၏ 70 အပတ်က
P ကို ဒံယေလ rofetian ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယဣသရေလအမျိုး၏မေရှိယအဖြစ်လာမယ့်ရန်ဗာဗုလုန်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအနေဖြင့်လုံးဝကိုတိုးချဲ့သောဣသရေလအမျိုးရဲ့သမိုင်းဝင်နှင့်ပရောဖက်ပြုအချိန်ဇယား, တစ် betydningsfull ပုံကြမ်းသော 70 ရက်သတ္တပတ်ဖုံးလွှမ်း။
ဒန် 9:24 - ခုနစ်ပတ်ချိုးဖောက်မှုအဆုံးသတ်အပြစ်များကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့, အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဘို့ဖွနေို, ထာဝရဖြောင့်မတ်ဘွားသောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနှင့်အနာဂတ္တိဖြည့်စွက်ခြင်း, အရှိဆုံးသောသန့်ရှင်းသောလိမ်းသမှကိုယျတျော၏လူတို့အပေါ်မှာနှင့်သင်၏သန့်ရှင်းသောမြို့တော်အပေါ်သို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်နေကြသည်။
နှစ်ပေါင်း၏ 70 နှင့်နောက်ဆုံးအပတ်တွင်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အသငျးတျောအလုပျမဟုတျဘဲမှဂျူးလူတို့နှင့်အတူရှိနေပါတယ်။ ဒန် 9:24 တှငျကြှနျုပျတို့အနှစ်အပေါငျးတို့သ 70 ရက်သတ္တပတ်လုပ်ဖို့ဂျူးလူမျိုးနှင့်ဂျေရုဆလင်နှင့်အတူရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုပထမဦးဆုံး 69 ရက်သတ္တပတ်များကဲ့သို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အသငျးတျောနှငျ့ဘာမှလုပ်ဖို့အသင်းတော်နဲ့နှစ်က၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်မဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
: D အခန်း Up ကို 6-19 ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလည်းဆငျးရဲဒုက်ခသည်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ဤအိမ်ရှင်နှငျ့ဘုရားသခငျအရေးယူဖြစ်သည့်နှစ်ပေါင်းတစ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းကျမ်းပိုဒ် 26 မှာဖော်ပြထားတဲ့သောနှစ်ပေါင်း၏ 69 နှင့် 70 ရက်သတ္တပတ်များအကြားတည်ရှိသည်ဖြစ်သော bracket ကဖြစ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်အဆုံးတစ်ဦးလွှမ်းမိုးအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိရကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါပျက်စီးမှုများစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက lltsåဘုရားသခငျ, ကျွန်တော်တို့ဟာပင်တေကုတ္တေမှာစတင်ခဲ့နှင့် 2000 နှစ်ပေါင်းဆက်လက်သောဘုရားကျောင်းအသက်, မခေါ်အဘယ်အရာကိုဖြည့်စွက်, နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်သို့သွားမီ။ ဘုရားသခင့ကောင်းစွာရှိသောအသင်းတော်အသက်အရွယ်အဆုံးသတ်ကြတဲ့အခါမှာ, ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ "ဣသရနှင့်အတူပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ " ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်
ဣသရေလအမျိုးကိုသစ္စာတော်ကိုသာဒံယေလ၏ပရောဖက်ပြုချက်၏နောက်ဆုံးခုနစ်နှစ်ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ဘယ်အချိန်မှာဣသရေလအမျိုးအားဘုရားသခငျသညျရဲ့ကတိကသင်၏ခြွင်းချက်မရှိကြောင့်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သူမှသာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ရောမအခန်း 11 တွင်ပေါလုသူသည်ဣသရေလအမျိုးတို့နှင့်မိမိအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မီသညျဘုရားသခငျရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွသူ့ရဲ့ပရိုဂရမ်ကိုအဆုံးသတ်ရမည်ဟုရှင်းပြသည်။
15:14 -16 တမန်တော် - ရှိမောင်ဘုရားသခငျသညျပထမဦးဆုံးသူကတပါးအမျိုးသားတို့တွင်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. (NT-ညီလာခံ) အတွက်လူစုအနိုင်ရသေချာလုပ်ပုံကိုဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဒါဟာပြောပါတယ်သောပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ကိုက်ညီသည်: ရဲ့ပြီးနောက် အေးငါသည်ဒါဝိဒ်၏လဲတဲကိုပြန်လာနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
V ကို ယာကုပ်၏အတွင်း sequential ခုံသမာဓိကိုမြင်လျှင်၌တည်၏။ ပထမဦးဆုံးဘုရားကျောင်းအသက်အရွယ်ရောက် လာ. , ထို့နောက်သူသည်ဒါဝိဒ်၏လဲတဲကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါလိမ့်မယ်။
ဆငျးရဲဒုက်ခထောင်စုနှစ်ရှေ့မှာဣသရေလများအတွက်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဣသရေလအမျိုးသည်အန္တိခရစ်နှင့်ခရစ်တော်အကြားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မေရှိယနိုငျငံတျောသို့ဂျူးလူမျိုးကိုဖိတ်ခေါ်နေချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတရားသူကြီးဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်စဉ်အတွင်း။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်နောင်တဣသရေလအမျိုးနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့က NT ဘုရားကျောင်းကိုကြည့်ခြင်း, အထူးသဖြင့်ညီလာခံရဲ့ပီတိအချိန်တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားနှငျ့ယရှေုခရစျ၏နေ့၌ခြားနားချက်ကိုသိသောကြီးမြတ် betydning သည်။ ပထမဦးဆုံးအယူဆချက်မှာကနေ့ကအကြောင်းပြောနေတာရဲ့နဲ့တူပါကကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဤ "နှစ်ခု" ရက်ပေါင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြပြီးအဆုံးအကြိမ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဇေ 1: 14-16 - ယေဟောဝါရဲ့ကြီးမားတဲ့နေ့, အနီးရှိအနီးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အလျင်အမြန်မည်။ ဒီထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည် Listen! ထိုအခါစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏သူရဲကောင်းများကိုအော်။ ဒေါသအမျက်နေ့,, တစ်ရက်သည့်အခါဦးချိုတို့နှင့်ခိုင်ခံ့သော murtornen ဆန့်ကျင်အော်ဟစ်ဆန္ဒပြပွဲများအသံတိမ်နှင့်မီးခိုးမြူ၏တစ်ရက်ပျက်စီးမှုများနှင့်လူဆိတ်ညံရာ၏တစ်ရက်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲရာနေ့သည်ထိုနေ့သည် ...
2 - သူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏မှကြွလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏, သူ့ကိုကျနော်တို့ညီအစ်ကိုတွေကိုသင်မေးမဟုတ်ဘဲရုတ်တရက်သူ၏ရာထူးကိုဆုံးရှုံးနှင့်ကြောက်လန့်ဖြစ်လာဖို့, မဝိညာဉျတျောသို့မဟုတ်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာအားဖြင့်စုဝေးစေခံရသည့်အခါ:2သက်2ငါတို့မှဖြစ်တပါတည်းယူဆောင်ခြင်းနှင့်သောသခင်ဘုရားနေ့၌အခြေခံသည်ရောက်လေပြီ။
N ကို ကပီတိ (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းက start) မှအထိအချိန်ကာလအတွင်းမြေကြီးပေါ်မှာမှထွက်သွားပါနှင့်ထောင်စုနှစ်လတံ့သောအမျက်တော်သည်နှင့် domstid လျှင်သည်အတိုင်းသခင်ဘုရား၏နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုခရကအမည်ရလုပ်ဖို့အစစ်အမှန်လျှို့ဝှက်ချက်သည်, NT ဘုရားကျောင်း၏အမှန်တရားနှင့်ဘုန်းအသရေ၏ပီတိနှင့်အတူရှိပြီးအဖြစ်ယနေ့ဓမ်မဟောငျးကမျြးတှငျဖျောပွထားခြင်းမရှိပါ။
ယရှေုခရယနေ့တစ်ခုသာ NT ဗျာဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဘုရား၏နေ့့ညီလေးဗျာဒိတ်တော်သည်မဟုတ်, တပါးအမျိုးသားတို့၏အချိန် NT အတွက်အသေးစိတ်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 6-19 မှာဖော်ပြထားတဲ့ dommens ။ NT ညီလာခံပီတိနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဘခမည်းတော်ရှေ့တော်၌ထိုပြင်ဆင်မှုကိုရည်မှတ်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာလူအသညျယရှေုခရစျသနေစဉ်ယနေ့ရည်မှတ် "သခင်ရဲ့နေ့" ။
ဖိလိပ္ပိ 1:6- ငါသည်သင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုအလုပ်စတင်ခဲ့သောသူမူကားလည်းယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ဖြည့်စွက်ရမည်ကိုသေချာဖြစ်၏။
B က ဤကျမ်းပိုဒ်၏ etydningen ပင်တေကုတ္တေမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကောင်းကင်ကလူကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မိမိအလုပ်စတင်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, အပြည့်အဝယေရှုအားလာမယ့်ကောင်းကင်မှအိမ်ပြန်သူ၏အသငျးတျောကိုရောက်စေဖို့အကြောင်း, ယနေ့လာမယ့်သညျယရှေုခရစျတျောဤလူမျိုးကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ ယူ. စေမည် နေရာ - အရှင်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်မတိုင်မီရာအရပ်ကိုကြာရာ။
2 သက်သာလောနိတ် 2: 1-12 - သက်သာလောနိတ်အတွက်ဘုရားကျောင်းကအမျက်ဒေါသနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြီးသားစတင်နေပြီဖူးနှင့်တကွ, သခင်ဘုရား၏သောနေ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့သူကိုအယူမှားဆရာ, ဆရာမများကကြောက်လန့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကအတုအက္ခရာများကိုစလှေတျနှင့်ပေါလုသည်ကိုယ်တော်တိုင်အပ်ပေးတော်မူ၏ဖူးနဲ့တူသူကတောင်အခွင့်အာဏာများစာတစ်စောင်ပေးစေခြင်းငှါ, လှပါတယ်။ ရှင်ပေါလုသည်ဤမှားယွင်းသောသင်ကြားမှုဆန့်ကျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်သည်, ဤ "သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်" အကြောင်းကိုအမှန်တရားသင်ပေးဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ consternation ဤမျှလောက် သာ. ကြီးမြတ်သူတို့ရုတ်တရက်သူတို့ကအလယ်၌ရှိထင်လာသောအခါဖြစ်ခဲ့သည်ပထမဦးစွာ 1 သက်သာလောနိတ် 1:10 ပေါလုသညျယရှေုလာရန်အမျက်တော်မှသူတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်လို့အသငျးတျောကကတိပြုခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့မှုကိုပြေနှင့်သခင်ရဲ့နေ့အန္တိခရစ်ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွက်လာကြပြီ, အပြစ်တရား၏လူမတိုင်မီစတင်မပေးနိုငျသောအသငျးတျောကိုဆောငျ, ဤမတိုင်မီ "ကိုပြန်ကိုင်ပြီး" ပထမဦးဆုံးလမ်းထဲကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပြုမရနိုငျသောမျဉ်းတား။ (ပထမဖယ်ရှားရေး), ဒိန်းမတ်ဘာသာပြန်ချက်)
V ကို အဖွင် 4-8 အန္တိခရစ်ထုတ်ဖော်, သူသည်ရှေ့သို့မလာနိုင်အောင်သူ့ကိုနောက်ကျောရရှိထားသူသူတဦးတည်း။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ 2013 ရေးလိုက်, ငါတို့သည်အန္တိခရစ်သေးရှေ့ဆက်မလာသောအခါနောက်ကျောရရှိထားသူဘယ်သူ / သူကဒီမှာပါသေးကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုနောက်တဖန်စောင့်ရှောက်နှစ်ဦးစလုံးက "" အဖြစ်ဖော်ပြထားနှင့် "သူက" ဖြစ်လာသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲတွင်စကားလုံးဝိညာဉျတျောစကားလုံးဂရိတွင် "pneuma" ဖြစ်ပါတယ်။ intetkönအတွက်စကားလုံးရှိပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာအမှန်မှာသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုလည်း "ဟုသူက" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ အဲဒီမှာအန္တိခရစ်ပြန်ကိုင်ပြီးရဲ့အရာပေါ်အများအပြားယူဆထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပေမယ့်ပုလ်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောထက်မကအခြားနိုင်ပါတယ်စဉ်နှစ်ဦးစလုံးလိင်မပါသောဖြစ်ကြောင်းပါပြီ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားအနီးကပ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်, GT ကိုခုနှစ်တွင်တမန်တော် 2nd အတွက်ပင်တေကုတ္တေ၏နေ့မွကွေီးပျေါမှာကိုလည်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သလိုပဲ, ဒါပေမယ့်အစားထိပ်ကနေကတည်းကရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြုလိမ့်မည်သကဲ့သို့။
: D ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောသညျလူသားတို့အတွက်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေမယ် uppryckelsens အခိုက်အနေဖြင့်အထက်မှလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်လာပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်စာအုပ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ကကိုယ်စားပြုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မမြင်နိုင်ကြဘူး။ ခုနစျပါးသည်အသင်းတော်တို့အားစာလုံးတှငျကြှနျုပျတို့သည်ဤစကားကိုနားထောငျ: နားရွက်သူကြားပါစေ ဝိညာဉ်တော်သည်အဘယ်သို့မိန့် ပရိသတ်တို့အား။ စည်းဝေးပွဲရဲ့ပီတိဖြစ်သည့်အခန်း 3, ပြီးနောက်မရှိတော့ပြောတတ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13:9- နားရွက်သူကြားပါစေ ။ မဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်လူတွေကိုကွဲပြားခြားနားသောကယျတငျတျောမူခွငျးတရားစီရင်သတင်းစကားနှင့်အတူကြွလာသည်ဟုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်, ကကောင်းကင်တမန်တို့ကိုပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ( 14 Rev: 6-7 ) ။
စည်းဝေးပွဲဖမ်းမိဖြစ်သည့်အခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပိုအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖို့နေရာမရှိရှိပါတယ်ထို့နောက်ညီလာခံသညျဘုရားသခငျကိုယနေ့သိတစ်ခုတည်းသောဗိမာနျတျောဖြစ်ပါတယ်။ (1 3:16) ။ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်ကိုယ်စားပြုကြောင်းတည်းသောခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းskökoförsamlingenဖြစ်ပြီး, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲကနေအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်သည်။
3 - ..Ty ပထမဦးဆုံး, အစွန့်ပစ်လာရမညျနှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မတရားမှုကို၏လူ, ဖျက်ဆီးခြင်း၏သားရှေ့ဆက်လာ:2သက် 2
: D ဂရိ et စကားလုံးစွန့်ပစ်, နှုတ်ကပတ်တော်ကို "apostasia" ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနာမ် "apostasia" ဟုကြိယာမှလာ "afistemi" အဘယ်သူ၏ huvudbetydning "ရွေ့လျား" သို့မဟုတ် "ဟုတယောက်ကိုတယောက်အရပျမှတစ်ခုခုရွှေ့ဖို့။ " အဆိုပါစကားလုံးအတိအကျမဆိုတယောက်ကိုတယောက်နေရာမှရွေ့လျားအတူဆက်သွယ်မှုများတွင်အသုံးပြု, သို့မဟုတ်ပါကပယ်ရှားတတ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါကဖြစ်ပါတယ်။
1: အဆိုပါစကားလုံးကိုလည်း 1 တိ4မှာဖော်ပြထားကြောင်းဘာသာရေး seductive သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်နှင့် ဆက်စပ်. များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးပရိုတက်စတသမ်မာကမျြးဘာသာပြန်များအချို့သည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသွားသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဆိုလိုတာက "ထွက်ခွာသွား" ဘာသာပြန်ဆိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
စကားများပျောက်ကွယ်သွား / go ဘာသာပြန်ထားသောသူပိုပြီးလူသိများသမ်မာကမျြးဘာသာပြန်ဆိုသူ၏အချို့ပျောက်ဖြစ်သူ Kenneth Wuest, Genovabibelen ဂျွန် Dawson, Coverdale, Crammer စသည်တို့ကိုပါဝင်သည် သင်ဘာသာပြန်ဆိုသူတူသောအစားစွန့်ပစ်၏စကားလုံးက "ထွက်ခွာ" ကိုသုံးမလားသိသာသည့်ပီတိများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခစပ်လျဉ်းအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစ 1 သက်သာလောနိတ်နှင့်2သက်သာလောနိတ်နှစ်ဦးစလုံးထံမှ teksten ၏နားလည်မှုနှင့် ပတ်သက်. အများကြီးပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပေးချင်တယ်။
16-17 - ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ် Fall နှင့်ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာနှင့်သိုးသငယ်၏အမျက်တော်မှထိုင်သောသူ၏မျက်နှာကနေကျွန်တော်တို့ကိုဝှက်ထား ", ထိုတောင်များနှင့်ကျောက်တုံးများအားဆို၏:6Up ကို။ မိမိအမျက်တော်သည်ကြီးမားသောနေ့ကရောက်လေပြီနှင့်အတူအဘယ်သူရပ်နိုင်သနည်း
က 15 Rev: 1 - ထိုအခါငါကောင်းကင်၌အခြားသောအံ့ဘွယ်သောနိမိတ်ကြီးမြင်ကြလျှင်, ခုနစျပါးသောဘေးကြီးကိုနောက်ဆုံးအတူကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါး; သူတို့ကိုများအတွက်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်၎င်း၏ပွညျ့စုံရောက်ရှိ။
V ကို အားထုတ်ခြင်းငှါဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကဲ့သို့တူညီသောအရာသခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုလုံးကိုဘေးဒဏ်ကြီးဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်, den.Vi မယ့်နောက်ဆုံးအပိုင်းပြီးသား6တံဆိပျမှာဒါသိုးသငယ်၏အမျက်တော်သည်ကြွလာတော်မူကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခန်း 15 တှငျကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်ပါလိမ့်မည်သိမြင် ပြီးစီးခဲ့ ခုနစ်လုံးကိုနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်နှင့်အတူ။ ဘုရားသခင့်အမျက်တော်သည်ထိုခုနစ်ယောက်တို့သည်ဘေးဒဏ်နဲ့သူ့ရဲ့စတင်ရှိသည်ပါဘူးဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်အစောပိုင်းကစတင်ပါလိမ့်မည်။
ခုနစ်လုံးကိုနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်နှင့်အတူဘုရားသခင်၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများနှင့်အမျက်ဒေါသအဆုံးသတ်ထားသည်။ သက်သာလောနိတ် 1: 9-10 ကျွန်တော်, ကောင်းကင် (ထိုပီတိ) မှယရှေုကိုလာရန်ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းကိုအတူတူစောင့်ဆိုင်းကတိပြုခဲ့ကြသည်။
1 သက်သာလောနိတ် 1: 9-10 - နှင့်ဘုရားသခင်ကြွလာမှအမျက်တော်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောသူသေလွန်သောသူတို့သည်, ယရှေုကနေကြီးပြင်းလာတော်မူသောကောင်းကင်ဘုံမှသားတော်အဘို့အစောင့်ပါ။
1 သက်သာလောနိတ် 5: 1-9 - v.2 သင့်အနေဖြင့်သခင်ဘုရားသည် (အမျက်ထွက်ခြင်း / ဆငျးရဲဒုက်ခ) ၏နေ့ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာလိမ့်မည်ဟုအလွန်ကောင်းစွာသိကြ၏။း9 - ဘုရားသခငျသညျအမျက်တော်ခံရဖို့ပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
: D ကျွန်တော့်ကိုဖတ်ပြီးပါပြီတဦးတည်းအပိုင်းကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ 1 သက်သာလောနိတ်မျြးအခနျးကွီးနောက်ပိုင်းတွင် 4:13 ညီလာခံပီတိနှင့်အာကာသယရှေုကိုအတူရင်ဆိုင်အကြောင်းပါ။ : 1-3 ရှင်ပေါလုအခန်း5မှာဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်သောဆငျးရဲဒုက်ခ ဆက်စပ်. အတွက်ပီတိကိုပြန်လိုက်တယ်။
သူကကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းဆိုင်ကြောင့်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်သူခိုးကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့ကိုအံ့သြမနိုင်သောနေ့ကိုဖော်ပြရန်အပေါ်တတ်၏။ သူကသူဆုံးမသွန်သင်ထားသည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်အားလုံးပြီးဆုံး, ကြှနျုပျတို့သညျယရှေုမှတဆင့်အမျက်ထွက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ကယျတငျတျောမူခွငျး shell မသေချာ။
F ကို နှစ်ခုအဆုံးအချိန်အသင်းတော်များ၏တဦးတည်းကိုယ်စားပြုရပ်ကွက် Philadelphia တွင်, လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်, စောင့်စေခြင်းကတိထားတော်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောကိုအသင်းတော်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကျင်းပ raptured မည်ဖြစ်ကြောင်းအင်အားအကောင်းဆုံးကတိတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဗြာဒိတျ 3:10 - သင်ကခံနိုင်ရည်အကြောင်းကိုငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ငါကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်ကိုသင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းရာကာလတွင်ထံမှသင်တို့ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ် ။
အတှကျဂရိစကားလုံး ထိန်းသိမ်း ဂရိစကားလုံး (စတီရီယိုမှ) ။ အဆိုပါကြိယာဤကျမ်းပိုဒ်များတွင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်။ အဲဒါကိုဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထိန်းသိမ်း ပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ် အနေဖြင့်သင်တို့ကိုကယ်ဖို့ ဆှီဒငျဘာသာပြန်ချက်၌တည်၏။ အဆိုပါတဖန်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစကားများလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော betydning ပေးခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်:
10 သင်သည်ငါ၏သည်းခံခြင်း၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမစောင့်သောကြောင့်ငါသည်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့ကိုကြိုးစားရန်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအပေါ်သို့ရောက်ရသောစုံစမ်းရာကာလတွင်မှသင့်ကိုစောင့်ရှောက်မည်။ (King James Version)
ယောဒီစကားလုံးကဂရိစကားလုံး "တဦးတည်း" အသုံးပြုသောအခါ, က "တဦးတည်းအရာတည်" ကိုဆိုလိုတယ်ပေမယ့် "သပိတ်ပင်" နဲ့အသုံးပြုသောအခါကဂျိမ်းဘုရင်ဘာသာပြန်ချက် "မှထိန်းသိမ်းထား" ဖြစ်ပါတယ်လိုပဲဆိုလိုတယ်စောဒကတက်သည်။ .. - က 1 သက်သာလောနိတ် 1:10 အတွက်ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီရသောအခါအသုံးပြုသောအလားတူပဲ, "ပိတ်ပင်" ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသော အနေဖြင့် လာရန်အမျက်တော်သည်။ ယောဟနျသညျ "စုံစမ်းရာကာလတွင်," ဟုသူက "ဟုလက်ဖက်ရည်ပြည်တန်ဆာ" wrote ခဲ့ကြောင်းကိုပြသချင်တယ်။ အဲဒီအစားထက်ယောဟန်သည် "ek tes horas" ပဲ "ဆိုလိုတာကရေးသားဖို့အတှကျအရွေးချယ် မှ စုံစမ်းရာနာရီ"
- ဗြာ 3:10 လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်သို့ရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်သွေးဆောင်မှု၏တစ်နာရီ, ။
တစ်ဦးက စုံစမ်းရာ tt နာရီတစ်ခုဘုရားသခင်၏အမျက်တော်၏စကားရပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အများဆုံးသဘောတူတန်ဖိုးများ၏လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အလိုရှိသနည်း ကအသငျးတျောသညျကွိုးစားပါနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ရှိပါသလား? အဘယ်သူမျှမကစမ်းသပ်ဖို့, ကမ္ဘာအနှံ့၎င်း၏ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကပီတိပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောကျန်ကြွင်းသောလူရည်ရွယ်သည်, သူအန္တိခရစ်ပူးပေါင်းပါပွီ။
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့သောစကားလုံး "က၎င်း၏ပြည်သူပြည်သားတို့ကို" (katoikeo), အားကြီးသောစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစကားလုံးတည်မြဲခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ခုခုအကြောင်းပါ။ ဒါကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အိမ်သို့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့ပြုလုပ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကို၎င်း, ကမ္ဘာမြေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ဘာသာရေးအတူဖျော။ သူတို့ဟာဖြစ်နိုင်သည်စည်းဝေးပွဲကိုရည်ညွှန်းမနိုင်ရာသည်၎င်း၏အမြဲတမ်းအိမ်, ဖို့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြ။
စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကျောင်းကဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောသူစိမ်းများနှင့်ဧည့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ (1 ပေ 2:11) နှင့် (ဗိုလ်မှူးကြီး 3: 1-2) အမြင့်ဆုံးသောရှာကြံမိုဃ်းကောင်းကင် (Efe 2:19) ၏သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားရှိခြင်း, မိုဃ်းကောင်းကင်၌မိမိတို့နေအိမ်ရှိခြင်း (ယောဟန် 14: 2) ။
tit 2:13 - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမြတ်သောဘုရားနှင့်Fräsareသညျယရှေုခရစျ၏မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ချက်ဘုန်းအသရေ၌ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်။
: D t ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းယေရှုရဲ့လာမယ့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသံသယဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘုရားသခင်၏အန္တိခရစ်, ဆငျးရဲဒုက်ခမြားနှငျ့အမျက်တော်သည်မစောင့်သင့်ပါတယ်။ သခင်ဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်အန္တိခရစ်အိမ်သူအိမ်သားကတဆင့်သွားကြသည်ကိုစိတျထဲတှငျရှိခဲ့ပါလျှင်သူလည်းသတိပေးခဲ့သည်ကအပေါ်သူ၏အသငျးတျောသညျပွငျဆငျခဲ့သည်။ အဆိုပါပီတိဖွစျနိုငျရှေ့မှာအမှု၌, အန္တိခရစ်ရှေ့ဆက်လာလို့ပဲ။
: D et မဆငျးရဲဒုက်ခ၌ဟောပြောပေမယ့်အစားနိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမည်ကျေးဇူးတရား၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုမရှေိယနိုငျငံတျော၏ရှေိယကိုပွနျလညျထူထောငျကြွေးကြော်မည် 144,000 ရွေးကောက်ခံယုဒလူတို့ဟောပြောသည်။ ကျနော်တို့ကဘုရားကျောင်းအသက်အရွယ်ကိုလက်စသတ်နေသည်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ကိုသိအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား။
အဆိုပါအာဇာနည်လည်းမိမိတို့၏ရန်သူများကိုအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလက်စားချေဖို့ဘုရားသခငျကိုမေးပါ။ ဤသည်ကိုလည်းညီလာခံတွင် session တစ်ခုထဲတွင်ယုံကြည်သူရဲ့သက်သေခံချက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူအပေါငျးကိုကယျတငျဖို့ဘုရားသခငျကိုမေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူလက်စားချေယူသညျဘုရားသခငျကိုမေးကြဘူး။ (ရောမ 12:19) အဆိုပါသက်သေနှစ်ဦးကိုလည်းမိမိကိုမိမိအပေါ်လက်စားချေနှင့်သူတို့၏ရန်သူများကိုအပြစ်ပေးဖို့ပါဝါရ။
F ကို ကညီလာခံလုပ်ဖို့အပေါ်လွန်လေပီတိသည်ပေါလုအားလာမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်örsamlingens။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျယရှေုဟာပီတိအကြောင်းကိုသင်ပေးမကြားခဲ့ပါဘူး။ ယရှေုသညျနောက်ဆုံးသောနေ့၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟောပြော, နှင့်၎င်း၏မြင်နိုင်သည်ဣသရေလအမျိုးထံသို့လာကြ၏။
ဒန်9ရှင်းလင်းစွာဣသရေလအမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်ပရိသတ်အဘို့မဟုတ်သည်နှစ်ပေါင်း 70 အပတ်ကကြောင်းပြသထားတယ်။
ရှုပ်ထွေးခြင်းအားဖြင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ကိုမှားယွင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အများအပြားကမျြးစာကိုတဆင့်, သခင်ဘုရားကိုအသင်းတော်၏အရွယ်မှာအမျက်တော်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးထားတယ်, ဒါပေမယ့်ကနေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်။ အမျက်ထွက်ခြင်း, သို့မဟုတ်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်မြေတပြင်လုံးခုနစ်နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကစတင်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုညီလာခံတွင်ထို့ကြောင့် raptured ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Filadelfia အသငျးတျောကစုံစမ်းရာကာလတွင်ထံမှသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်ရုံလိုပဲ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အခနျး3ပြီးနောက်ကျနော်တို့မရှိတော့လည်းခုနစ်နှစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတည်းဟူသောအခန်းကြီး 6-19 ပရိသတ်ရှာပါ။ ကျနော်တို့ကိုကြည့်မဟုတ်သလိုအနီးကပ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်။ အဆိုပါ Saved အထဲ၌ကျိန်းဝပ်သောသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉျတျောကိုမွကွေီးမှသွားပြီအခါကအန္တိခရစ်နှင့်သူ၏အိမ်တော်အဘို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်ရောက်ကြောင်းတည်းသောခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပြည်တန်ဆာဖြစ်၏။
ကျနော်တို့ညီလာခံဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖြင့်သင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအထောက်အထားများကိုရှာတွေ့ပေမယ့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, ကနေစောင့်စေခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌တိုက်ရိုက်ယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်စောင့် Shell ။ ဆငျးရဲဒုက်ခသို့မဟုတ်ယာကုပ်၏ဒုက္ခကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်သောသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မေရှိယကိုသို့မဟုတ်မယရှေုကိုအသိအမှတ်မပြုချင်လျှင်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ယုဒလူတို့အထူးလမ်းအတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါလိမ့်မည်။ သူ့အချိန်အတွက်အန္တိခရစ်လည်းမြို့နယ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်၏တဲ။ အဆိုပါစီရင်စုနယ်ပင် 24 အကွီးအကဲမြားအားဖြင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစမှာမိုဃ်းကောင်းကင်၌ကိုယ်စားပြုနေသည်။ သခင်ဘုရားကိုအတူတူကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်တကွ, ညီလာခံအဖြစ်ဗြာဒိတျ 20 အတွက်မြေကြီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ။
: D et ဒီထိုနည်းတူယုံကြည်သူများ၏ပီတိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီဖြစ်ပေါ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဖြစ်သော Pre-tribläranများအတွက်ကာကွယ်ရေးဖြစ်သောပထမဦးဆုံးပို့စ် "ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီယေရှုရဲ့ပြန်လာ," တစ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အများကြီးကြီးမြတ်အခန်းကဏ္ဍမှာပီတိအတွက်မော်ဒယ်, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တှငျနထေိုငျသောအချိန်ကာလသောညီလေးအတွက်ဖြေရှင်းချက် entitles ရှာပါ။ ငါ GT ကိုထံမှဖြေရှင်းချက်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ပီတိကြည့်ရှုအတည်ပြုနိုင်ရပိုင်ခွင့်အချို့ကိုပြသချင်တယ်။
N ကို ယရှေုကိုမဿဲ 24 နှင့်ဒံယေလ၏ပွောသောကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကြုံတွေ့ရအထွေထွေဆင်းရဲခက်ခဲမှုကို (gr.thlipsis) နှင့်ကျနော်တို့ကြီးစွာသောဒုက္ခ (gr.Thlipsis Mega) တွင်ကြုံတွေ့ရဆင်းရဲဒုက္ခအကြားကွဲပြားခြားနားသွားသဖြင့်စတင်ရမည်ဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလောကအတွင်းအခန်း 12 အတွက်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူများ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတိပကတိအထွဋ်အမြတ်, လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစစ်တိုက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားများအတွက်ခံစားနေရပြီး။ ဆငျးရဲဒုက်ခမျိုး, ယရှေုကျနော်တို့ကနေအခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုကတိထားတော်ဘူး။ ကျနော်တို့ကဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်ကွုံတှေ့အမျက်တော် ထွက်. ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားသို့မဟုတ်ဖြတ်သန်းသွားစရာမလိုပေကိုကတိထားတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခုကိုတစ်ခုခုပါပဲ။
ပိုပြီးမကြာသေးမီအချိန်များမှာတော့ဘုရားသခငျရဲ့အမျက်ဒေါသကွဲပြားခြားနားသော betydningar လူတွေရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခငျ၏သိုးသငယ်၏အမျက်ဒေါသ, လူသားရဲ့အမျက်တော်သည်, စာတန်ရဲ့အမျက်ဒေါသအမျက်တော်သည်ဖျောပွထားနှင့်က confuses ။ နှစ်ဦးစလုံးအခါဘယ်လိုဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ဖြစ်ပေါ်အပေါ်သဘောမတူလည်းရှိပါသည်။
ခုနှစ်တွင် ဗြာ, ငါတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသိုးသငယ်နားမှာကျိုးပဲ့ပထမဦးဆုံးခြောက်လဖျံ၏အခန်း6မှာစတင်သည်နှင့်မျြးအခနျးကွီး 16-18 အတွက်အမျက်ဒေါသ၏ဘုရားသခငျ၏တရာခုနစ်ပါးဖလားနှင့်အတူပြီးဆုံးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ယခုပင်လျှင်ပထမဦးဆုံးခြောက်လဖျံစဉ်အတွင်း, ငါတို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဘဝအပေါ်တစ်ဦးအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ။ ပထမဦးဆုံးခြောက်လဖျံကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့လေးပုံတပုံများအတွက်စစ်, အစာခေါင်းပါးသောအခါ, ဘေးဒဏ်နှင့်သေခြင်း၏အကြောင်းတရားများဆောင်ခဲ့ရမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ခန့် 1.7 ဘီလီယံလူဦးပထမဦးဆုံးခြောက်လဖျံစဉ်အတွင်းသေဆုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတူဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစဉ်အတွင်းယုံကြည်သူများဖြစ်လာသူတွေကို၏အာဇာနည်ရှိရလိမ့်မည်။
ကောင်းကင်တမန်တို့သည်တံပိုးခုနစ်လုံးအတွက်မှုတ်သောအခါ, ဒါကြောင့်မြေကြီးတပြင်အော်တိုအသစ်သောရာဇဝတ်မှုယုံကြည်မှုများအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတရားသူကြီးတွေသဘာဝလွန်ဘေးဒဏ်တွေနဲ့အစွမ်းထက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစပ်။ ခုနစ်လုံးကိုတံပိုးသူတို့၏ဝေဒနာနှင့်အတူအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့အခါမှာဒါဖျက်ဆီးခံရရေသုံးပုံတပုံရှိသည်, ပင်လယ်၌ရှိသမျှသောအသက်တာ၏တတိယကွယ်လွန်သွား, မြေကြီးများ၏သုံးပုံတပုံအထိမီးမရှို့ပါလိမ့်မည်, နှင့်ပထမဦးဆုံးခြောက်ဦးကျန်ရစ်ခဲ့သူလူများ၏သုံးပုံတပုံ အဆိုပါဖျံသေဆုံးပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးအပိုဆောင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.7 ဘီလီယံလူဦး၌။
V ကို အတွက်ဟင်းလျာများ၏အမျက်ဒေါသရန်ဘဝရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုမည်ပေမယ်သာမှန်းဆနိုင်ပါတယ်လူမည်မျှမမိန့်ခွန်းရှိပါတယ်။ ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် (မဿဲ 24:22) ကိုကာလတာရှည်နေသည်မဟုတ်လျှင်မရှိလူ့ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခံရဖို့ကပြောပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမျက်ဒေါသအားလုံး decription ထဲကဖြစ်ပါတယ်, သူတို့၏အကျိုးဆက်များသို့မဟုတ် betydningen နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။
အမျက်တော်သည်ဤဖလားသညျဘုရားသခငျ၏တရားစီရငျခွငျးအဆုံး၏ပြီးစီးဖြစ်လာသည်။ ဗြာ 16: 16-21 အစဉ်အဆက်ရှေ့မှာတူသောဘာမှရှိဖူးကြောင်းထိုကဲ့သို့သောကြီးမားငလျင်၏ပြော၏။ ဒါကြောင့်များ၏အကျိုးဆက်ဒီတော့အားလုံးကျွန်းပြေးပြုကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, တောင်များကိုနောက်တဖန်မဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအဘယ်သူမျှမကထိုအခြိနျတှငျမွကွေီးပျေါမှာဖြစ်စလေိုကွောငျးပွောဆိုသောအခါအကြှနျုပျယုံကွညျသညျ။
M က ဎတစ်နည်းကြောင့်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ထင်ရှားခြင်းနှင့်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကျော်ပြည်ပမှာသှနျးသောအခါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသအမျက်နှင့်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ဖြစ်စေမယ့်အဖြစ်တစ်ခုလွယ်ကူသောနေ့ကမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အပေါ်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်အမျက်ထွက်ခြင်း, သခင်ရဲ့နေ့, အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်။ ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုနှင့်အတူစတင်မယ့်ကာလလည်းကျိုးနှငျ့ဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဣသရေလအမျိုးနှင့်လောကီလာရန်မြင်နိုင်သညျယရှေုမှာ culminates ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ပေါလုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစည်းဝေးပွဲဆငျးရဲဒုက်ခကြောင်းအဆုံးသတ်ဒဏျ၏ဤအချိန်ကာလအတွင်းမွကွေီးပျေါမှာမဖြစ်မယ်လို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သခင်ဘုရားကိုလာရန်ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်တင်မည်ဒါကြောင့် 1 သက်သာလောနိတ် 1:10 ရှင်ပေါလုပြော၏။ အဆိုပါစကားလုံး ကနေ အခြေခံစာသားကိုကဖြစ်ပျက်သည့်အခါတစ်နည်းငါတို့သည်, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနိုင်အောင်, အကောင့်သို့အချိန်နှင့်နေရာနှစ်ခုလုံးကိုယူပြီးအားဖြင့်ဆိုလိုပါတယ်။ ဘုရားသခင်အဘို့အမျက်တော်ခံရဖို့ပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
N ကို ဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်အကြောင်းကိုဒါမကြာခဏကြီးစွာသောဒုက္ခကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူတွေကိုညွှန်ပြနေသည်, သူတို့သည်လုံးဝဟုတ်မှန်ကြ၏။ ကြီးစွာသောဒုက္ခ 3.5 နှစ်ပေါင်းဘုရားသခငျသညျသို့မဟုတ်အမျက်တော်၏လူဆိတ်ညံရာအမျက်တော်သည်၏စက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏နှင့်အတူစတင်နေပါပြီခုနစ်နှစ်၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတစ်လျှောက်လုံးကြာရှည်ခံသည်။
6 ထ: 16-17 - "ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ် Fall နှင့်ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာနှင့်သိုးသငယ်၏အမျက်တော်မှထိုင်သောသူ၏မျက်နှာကနေကျွန်တော်တို့ကိုဝှက်ထား၏။ မိမိအမျက်တော်သည်ကြီးမားသောနေ့ကရောက်လေပြီနှင့်အတူအဘယ်သူရပ်နိုင်သနည်း
15 Rev: 1 - ထိုအခါငါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်အခြားအံ့ဘွယ်သောနိမိတ်ကြီးမြင်ကြလျှင်, ခုနစျပါး၏ဘေးဒဏ်, နောက်ဆုံး; သူတို့ကိုအဘို့ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်၎င်း၏ပွညျ့စုံရောက်ရှိ။
ဤတွင်ကျွန်တော်ပင်ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ခတ်မှာဒါသိုးသငယ်နှင့်, ခမည်းတော်သည်အတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်သည့်အခါဘုရားသခငျ့အမျက်ဒေါသအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သောသိုးသငယ်၏အမျက်တော်လာရှိပါတယ်ကွညျ့ပါ။ လည်းဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မူသောဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် - မကြာခဏအဖြစ်ခုနစ်လုံးကိုနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်ကြောင့်အထဲကထောက်ပြနေပါတယ်။ သို့သော်အခန်း 15 ခုနှစ်တွင်: 1 ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်၎င်း၏ရောက်ရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် ကု ဤနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်နှင့်အတူ, ကြောင်း၎င်း၏အစပိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအရာခုနစ်ပါး၏ဘေးဒဏ်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ညျဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်သည်ကာလရုံပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက Braham သခင်ဘုရားသည်မတရားသောသူကို (1 ထှကျမွောကျရာ 18:23) နှင့်အတူဖြောင့်မတ်ဖျက်ဆီးဖို့ကသူ့သဘောသဘာဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရအကြောင်းကို၎င်းတို့၏ငြင်းခုံ၏သတိပေးခဲ့သည်။
ထာဝရဘုရားသညျဘုရားသခငျရေးရာကယ်ဆယ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှုတွေထံမှ: ပတေရုသလော, သခင်ဘုရားအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက် "အပြစ်သွေးဆောင်ရာထဲကဘုရားရေးရာကယ်တင်" အကြောင်း, ယာယီဥပမာအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ဘုရားသခငျ၏တဘက်မှအထွေထွေမူအရကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ကိုလောတ၏ဥပမာပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင် "။ (ထွက်) မှစ. တရားစကားတော်သည်ဤဖြစ်ရပ်၏အချိန်နှင့်နေရာကိုဆိုလိုသည်။
F ကို Ragan ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရားသည်သူ၏မင်္ဂလာဆောင်မှသက်သာခြင်းသို့မဟုတ်သတိပေးချက်များပြောတတ်သောစကားများလာမှဒေါသအမျက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရှာတှေ့နိုငျရှိမရှိပါသလဲ ကျွန်တော်သူဆငျးရဲဒုက်ခဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောအချိန်ကုန်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ကတိပေးထားရသောစကားများရှာတွေ့နိုင်သလော ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစဉ်အတွင်းညီလာခံရဲ့တည်ရှိမှုကိုတွေ့မြင်ရနိုင်မလား?
အဘယ်သူမျှမ, ငါတို့မပေးနိုငျပါသညျ! သူကကျွန်တော်လာမှဒေါသအမျက်ကြောင့်ထိခိုက်ရမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးထားတယ်နေစဉ်ပရိသတ်သွားပြီနှင့်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းအစ္စရေးနဲ့သူ့ရဲ့ပရိုဂရမ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည့်အခါသူသည်ဣသရေလအမျိုးမှhänvänderဘာလို့လဲဆိုတော့။
နောဧလက်ထက်၌ရှိကြ၏, ထိုနည်းတူလူသားကိုလာမယ့်ရကြလိမ့်မည်ကဲ့သို - မဿဲ 24:37 ။
H ကို Erren ကျွန်တော်တို့ကိုနောဧကိုလေ့လာဖို့နှင့်ရပ်စဲ၏ကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူနှိုငျးယှဉျလိုသည်။ မဿဲ 24:37 အတွက်ကျနော်တို့ကနောဧလက်ထက်၌၌ရှိ၏ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ကြောင့်သခင်ဘုရား၏ပြန်လာမှာဖြစ်လိမ့်မည်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းဖတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့နောဧရဲ့ နေ့မှစ. ငျယူနိုငျသရေလွှမ်းမိုးခြင်း, လှေမျးမိုးနှင့်နောဧနှင့်သူ့မိသားစုအပေါ်သခင်ဘုရား၏ကာကွယ်လက်ရှေ့တော်၌ထိုအချိန်အကြောင်းပါ။
ယရှေုသညျဆငျးရဲဒုက်ခရှင်သန်သူကလူကိုချက်ချင်း 1000 နှစ်ကနိုငျငံတျောသညျရှေ့တျော၌တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုရှင်းပြရန်နေဆဲဖြစ်သည်။ တချို့ကတရားသဖြင့်စီရင်သို့ raptured နှင့်ရှေိယနိုငျငံတျောသို့သှားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါလိမ့်မည်။ လွှမ်းမိုးသောကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ထိုနည်းတူ, လူတွေတရားသဖြင့်စီရင်သို့ raptured လိမ့်မည်။ နောဧရဲ့တစ်နေ့တာကိုလူများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၏အောက်တွင် သွား. , တူညီသောလမ်းအတွက်, လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နှင့် straks ယေရှုရဲ့တရားစီရငျခကျြမှာအပြီးပါလိမ့်မယ်။
: D et ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရောကျမှီနောဧလက်ထက်၌တှငျနထေိုငျသူမြား၏သုံးခုအမျိုးမျိုးရှိကြ၏။ ဒါဟာသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုငြင်းပယ်သူမယုံကြည်သောသူတို့ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရှိကြ၏။ ဒါဟာရေလွှမ်းမိုးမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခံခဲ့ရသည်သောနောဧနှင့်သူ့မိသားစုကြီးကရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရောကျမှီထာဝရဘုရားအဘို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားသူဧနောက်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီသူများကလူယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုသုံးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရုံထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်အချိန်ကိုအဆုံးသတ်ကြသောအခါသောကာလ၌လူမျိုး၏သုံးမျိုးကိုမြင်ရ:
·နောဧရဲ့တစ်နေ့တာရေလွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်ပျက်စီးလာသောလူများဟာသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယေရှုအတွက်သိမ်းယူပြီမဟုတ်သူမယုံကြည်သောသူတို့, ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဲဒီလူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်, ဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်နှင့်ထိတွေ့ပါစေ။ ယင်းဘေးဒဏ်ကြီးအတွက်နောင်တရကြဘူးသူများသည်သညျယရှေုကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်, ပြီးတော့မီးမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။
·နောဧသည်ထာဝရဘုရား 1000 နှစ် Reich နှင့်အတူ၎င်းတို့၏သစ်စာဂတိဖြည့်စွက်လိမ့်မည်ဟုဣသရေလအမျိုး၏အကြွင်းအကျန်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ နောဧသည်အရှင်လူတယောက်လမ်းအတွက်ဒုက္ခအတွင်းမှာကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်သောဣသရေလအမျိုး၏ရွေးကောက်တော်မူသည်။ ယင်းဘေးဒဏ်ကြီးသို့ 3.5 နှစ်ပေါင်းယုဒလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအန္တိခရစ်နှင့်သူ၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းအဘို့ထိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါလိမ့်မယ်ရှိရာတောသို့ထွက်ပြေးယုံပါလိမ့်မယ်။ နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ကိုလည်းဖြစ်ဂျူးလူမျိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိရလိမ့်မည်။
ဧနောက်သည် / ဧနောက်စည်းဝေးပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
1 ကမ္ဘာဦး 5:24 - ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူဘို့ဤထုံးစံ၌ဧနောက်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာသူမဟုတ်ခဲ့ပေ။
H ကို Änok anti-ခရစ်ယာန်ဆငျးရဲဒုက်ခအဘို့အချိန်နှိုင်းယှဉ်ညီလာခံပီတိမော်ဒယ်တစ်ဦးအလွန်ပြောသောဖြစ်ပါတယ်။ ဧနောက်အာဒံမှ 7th ဇာတ်စင်တှငျနထေိုငျနှင့်အမည်ရရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုမီကာလ၌, အလွန်အထူးကာလ၌အသက်ရှင်။ , နှုတ်ကပတ်တော်အဲဒီအခြိနျမှာဒါမွကွေီးပျေါမှာကွီးစှာသောယောက်ျား၏ဒုစရိုက်အပြစ်သည်နှင့်လူရဲ့စိတျနှလုံးနှငျ့စိတျရငျးအစဉ်မပြတ်လုံးဝမကောင်းသောအကွလို့ပြောပါတယ်။
ဒီအပွစျရှိလူ့ hubbub အလယ်၌, ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူနှင့်အတူလမ်းလျှောက်သူတစ်ဦးအချင်းလူသား, ဧနောက်သည်ရှိ၏။ (1MOS 5:24) ဧနောကျ၏သက်သေခံချက်ကိုသူသညျဘုရားသခငျ၏ကျေးဇူးတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ 11း5)
5 - ဧနောက်ကိုယူသှားခဲ့သညျယုံကွညျခွငျးအားဖွငျ့: ဟေဗြဲ 11 အသေသတ်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နေရခြင်းမရှိဘဲ ။ ဘုရားသခငျသညျမိသောကြောင့်ထိုသူတို့က, သူ့ကိုမတွေ့ရှိတွေ့ရှိခဲ့ ကိုယ်တော်တိုင်မှသူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွား ။
H ကို Änokဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သောအဘို့အသေခံခြင်းမျိုးစုံမြည်းစမ်းခြင်းမရှိဘဲဖမ်းမိခဲ့သည်။ ဟာလာမယ့်ပေးနေတာနဲ့အပွစျနှငျ့အဓမ္မ၏ပြစ်ဒဏ်နှင့် ပတ်သက်. , သူ့အချိန်လူများ, ဟစျကျွောကွအဖြစ်သူ၏ပီတိမတိုင်မီကာလ၌။ အပြစ်တရား၏အရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိသောအခါတွင်လည်းနောဧရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌အပြစ်တရားပေါ်တွင်သညျဘုရားသခငျ၏တရားစီရငျခွငျးသညျ လာ. သူကလွှမ်းမိုးကိုစလှေတျ, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ဧနောက်သည်ပြီးသားထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြစ်ခဲ့သည်။
လာအမျက်တော် (1 သက်သာလောနိတ် 1:10) - အဆိုပါရေလွှမ်းမိုးမြေကြီးပေါ်မှာအပို့နှင့်အဆုံးကာလ၌မတရားသောသူကိုလူတွေပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါသည်
: D "ကိုယ်တော်တိုင်ကသူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွား" metatithemi ဖြစ်ပါသည်, နှင့်လွှဲပြောင်း, အခြားသောအရပ်များသို့ပို့ဆောင်ဆိုလိုသည်မှာ KVJ တှငျ "transportet" ဘာသာပြန်ထားသောသည် et ဂရိစကားလုံး။ ဧနောက်သည်, တစ်နည်း၌ရှိ၏ပို့ဆောင်သို့မဟုတ်သူသည်သေခြင်းအရသာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ 1 ကောရိန်သု 15 လူတိုင်းမအိပ်သင့်ကြောင်းပြောပြပေမယ့်အားလုံးအသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။ ဒါဟာထာဝရဘုရားသည်မိမိအိမ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြာမလူတိုင်းသေခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ရှိရာမြို့နယ်၏ပီတိကိုဖော်ပြထားတယ်သူကိုရှင်ပေါလု, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။
ဧနောက်သည်နောဧနှင့်သူ့မိသားစုကိုကိုယ်စားပြု, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ထိုညီလာခံတွင်ပီတိကိုကိုယ်စားပြုမယ့်လိုပဲကဆငျးရဲဒုက်ခမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်သည့်, ဣသရေလအမျိုး၏အကြွင်းအကျန်ကတိထားတော်နှင့်မရှေိယနိုငျငံကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့။
: D ဒီနေရာမှာဖော်ပြစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်မည်အကြောင်း et ဧနောက်သည်အာဒံမှသတ္တမဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ညီလာခံသတ္တမညီလာခံဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးတတိယအတွက် featured ခံရဖို့တူညီတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့သမိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးအရာ, လောဒိကိကာလ၌နေထိုင်ပြီးမြို့နယ်များအတွက်ပရောဖက်ပြုအချိန်ဇယားဟာပီတိရှေ့မှာလည်းညီလာခံ၏နောက်ဆုံးပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဧနောက်သည်အာဒံအားပြီးနောက်släktsledသတ္တမအဖြစ်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာဖန်ဆင်းခြင်းပြီးနောက် sjutusende နှစ်ပေါင်း၏အစမှာနေထိုင်နေကြရသည်။
R ကို နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဧနောက်ကနေညီလေးကျွန်တော်တို့ကိုပရိသတ်ကယေရှုရဲ့မစ်ရှင် command ကိုစဉ်းစားစေသည်ရာလေ့ကျင့်ရေးနှင့်သင်ကြားရေး, ကိုဆိုလိုသည်။ - " သင်တို့ သွား. လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ" (မဿဲ 28:19 )
ဟီးဘရူးအစဉ်အလာအရ, ဧနောက်ကိုလည်းပရိသတ်နေ့ဖြစ်သောပင်တေကုတ္တေ၏နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်နေသည်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုမီ Hanoks ဘဝနှင့်သူ၏ပီတိပရိသတ်ပီတိရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။
1 ထှကျမွောကျရာ 19:22 - "ငါသည်သင်တို့အားစကားပြောမြို့ဖြုတ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် "သင်ရှိပါတယ်သည်အထိဘာမှမပွုနိုငျဘို့, အဲဒီမှာမှလွတ်မြောက်ရန်မြန်မြန်
, G ud သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရတို့အော်ဟစ်ကြားလျှင်, မြို့ရွာတို့အရာ၌နန်းထိုင်၏သောပြင်းထန်အပြစ်တရားကိုမြင်တော်မူ၏။ အာဗြဟံသည်ထိုအရပ်၌အတော်လေးချမြို့များဖြောင့်မတ်တဆယ်ဖို့ခဲ့ကြသည်မြို့များကိုမဖျက်ဆီးစေရန်သခင်ဘုရားနှင့်အတူ bargained ။ အခုဆိုရင်မြို့တို့၌ဖြောင့်မတ်ပေမယ့်ဖွင့်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဆယ်မရှိ - လော။
ထိုသို့ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကျူးလွန်ခဲ့ကွောငျးအရာတစ်ခုခုကိုမဟုတျကွောငျး၏ကြားမှသူကိုယ်တော်ကြောင့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးမြို့များကိုဖျက်ဆီးပြီးအရှုံးခံခဲ့ပါဘူး။ သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရသညျဘုရားသခငျ၏တရားစီရငျခွငျးအမျက်တော်သည်အကြောင်းမဲ့, ဘုရားသခငျကမြို့ကြီးများကိုကျော်မီးနှင့်ကနျ့မိုးရွာပါစေခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းလောတမြို့ကိုစွန်ဇောရ၏အိမ်နီးချင်းမြို့မှာလုံခြုံခဲ့ကြဖူးသည်အထိသို့သော်လည်းသခင်ဘုရားအမျက်တော်ကိုစတင်နိုင်ဘူး။
လုကာ 17: 28-29 - ကလောတ၏လက်ထက်ကာလ၌ဖြစ်ခဲ့သည်ထိုနည်းတူ: သူတို့ စား. သူတို့သောက်, သူတို့ကဝယ်သူတို့ကိုစိုက်ပျိုးရောင်းချပေမယ့်လောတသောသောဒုံမှထွက်ကြွသောနေ့ကကောင်းကင်ကနေမီးနှင့်ကနျ့ရွာစေခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးခံရ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်။
L ကို ot သညျဘုရားသခငျ၏တရားစီရငျနာကျင်မှုအတွက်ဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်အချိန်နှင့်နေရာကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ လောတကိုကယ်နှုတ်ရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်သူကောင်းကင်တမန်များလောလုံခြုံခဲ့မတိုင်မီသူတို့ဘုရားသခင်စီရင်မစတင်နိုင်ကြောင်းကြွေးကြော်။ လောတထံမှကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူသည်ပရိသတ်ပုံဖြစ်ပါသည် အချိန်နှင့်နေရာ လာရန်အမျက်တော်၏။
2 ပေတရု 2: 7-9 - သို့သော်သူသည်မတရားသောသူသည်ဖျက်သိမ်းဘဝများကညှဉ်းဆဲသူဖြောင့်မတ်လောတကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
P ကို etrus ခပ်သိမ်းသောဒုစရိုက်သာသက်ရောက်သည်ကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏မတရားသောသူသည်နှင့်အတူဖြောင့်မတ်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မမူကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြသသောတရားသဖြင့်စီရင်အကြောင်းကိုသင်ပေး။
H ကို ဒံယေလနှင့်အဆိုပါမီးဖိုထဲအတွက်လူသုံးယောက်အကြောင်းကို istorien ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်အနာဂတ်ပြီးဆုံး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုပြသသောဓမ်မဟောငျးကမျြး၏ပုံပြင်များတစ်ခုဖြစ်သည်။
အန္တိခရစ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်ရသောရှငျဘုရငျဗုခဒ်နေဇာ, ဗာဗုလုန်မြို့၌အီရတ်၏လွင်ပြင်ပေါ်ရွှေရုပ်တုဖွင့်ထား၏။ အန္တိခရစ်မိန့်ခွန်းပုံခိုငျးနိုငျသောရုပ်ထုမြင့်ခြောက်တောင်ကျယ်ပြန့်ခြောက်ဆယ်တောင်ရှိသောကြောင်းမှတ်ချက်မနာခံသောသူတို့အဘို့ယင်းအကျိုးဆက်ကတော့မီးဖိုထဲသို့ချပစ်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိပြပ်နှင့်ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းငှါလူတိုင်းအတင်းအကျပ် 666. ဗုခဒ်နေဇာသည် ။ အဆိုပါမီးလောင်သောမီးဖိုဘုရားသခင်၏အမျက်တော်နှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယု၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ (မာလခိ 4: 1 - ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ထိုနေ့ရက်သည်လာ, တကမီးဖိုထဲအဖြစ်လောင်ကျွမ်း။ )
S က adrak, Meshach နှင့် Abednego ဗုခဒ်နေဇာရဲ့ရုပ်တုရှေ့မှာဦးညွှတ်ရန်ငြင်းဆန်, သူတို့သည်မီးဖိုထဲသို့ချပစ်ကြ၏။ ရှင်ဘုရင်သည်မီးဖိုထဲသငျသညျအစဉျအမွဲကဖြစ်ဖူးထက်ခုနစ်ကြိမ်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်အပူသင့်ကြောင်းအမိနျ့တျောနှငျ့စုံလင်မိန့်ခွန်း၏ရုပ်ပုံလည်းမရှိ။ ထာဝရဘုရားသည်မီးဖိုထဲအတွက်ရှာဒရက်, Meshach နှင့် Abednego protected သောမိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်, သူတို့မီးမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲထွက်လာ၏။
သို့သော်ဒံယေလတစ်နေရာရာသည်အဘယ်မှာရှိဒီဇာတ်လမ်းကို၏မေးခွန်းကိုဖြစ်ပါတယ်အသနားခံ။ သူသည်ရုပ်တုဖို့ဒူးညွှတ်နေသောသူတယောက်ခဲ့သလား အဘယ်ကြောင့်သူတက်ရောက်ခဲ့သည်မခံခဲ့ရ, ဘာကွောငျ့လဲသူလည်းမီးဖိုထဲသို့ချပစ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ဒံယလေကဗုခဒ်နေဇာရဲ့ရုပ်တုဖို့ဒူးညွှတ်မဟုတ်ကြောင်းမျှမျှတတအချို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒံယလေကပဲလူတိုင်းရုပ်တုကိုးကွယ်ကြ၏မယ်လို့ဘယ်မှာတင်ပြ, ဒါမှမဟုတ်ဆငျးရဲဒုက်ခမီးလောမီးဖိုထဲမှာမဟုတျဘူး။ ဘုရားသခင်က "သူ့ကိုမပယ်ရှား။ " ဖူး
ရှင်ဘုရင်သည်မီးဖိုထဲတွင်ဤလူတို့သညျရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခကျြသုံးဂျူးယောက်ျား (ဒံ 3:12) ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသုံးဂျူးယောက်ျားထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်သည့်ရွေးကောက်ဣသရေလအမျိုး၏ပုံဖြစ်ပါသည် မှတဆင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဒံယေလ, ချစ် (ဒံယေလ 10:11) ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်သူကိုပရိသတ်တစ်ဦးရုပ်ပုံလွှာဖြစ်ပါတယ် ထံမှ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း။
P ကို aulus အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်း 20 လက်ဝါးကပ်တိုင်ပြီးနောက်, ပီတိသင်ကြားခြင်းနှင့်ဗျာဒိတ်တော်တင်ဆက်သူကိုမွကွေီးပျေါမှာပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယရှေုကမိမိအချိန်၌မိမိတပည့်ဖို့ပီတိသင်ပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအခြိနျအထိကအမည်မသိဖြစ်ခဲ့သည်။ အသင်းတော်၏အဆိုပါပီတိအဓိကအားဖြင့် 1 သက်သာလောနိတ် 4:16 နဲ့ 1 ကောရိန္သု 15:52 တှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည်။
19-21: ငါတို့သည်အတွက်ပရိသတ်တို့အားပြန်ပြောပြနိုင်မ GT ကိုအနေဖြင့်ရှင်းလင်းကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုမှာဟေရှာယ 26 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ 16-17 & 5:9ငါသည်ကျနော်တို့ဟေရှာယအခန်းကြီး 26 နှင့် 1 သက်သာလောနိတ်4အတွက်ပီတိအကြောင်းကိုပေါလု၏ဒေသနာ၌တွေ့မြင်သောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။
ဂျေ 26:19 ES - သို့သော်လည်းသင်တို့အသေကောင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်, သူတို့အလောင်းတွေထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ (ပထမအားဖြင့်ခရစ်တော်သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်) နိုးနဲ့မနာသီချင်းဆို, မွမှေုနျ့၌နထေိုငျသောအသငျတို့သ, သင့်နှင်းဘို့အလငျး၏တစ်ဦးနှင်းဖြစ်ပါတယ်, မြေကြီးသေလွန်သောသူတို့သည်အထဲကငါပေးမည်။ ငါ၏လူတို့လာကြနှင့်သင်၏အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့သွားပါကသင်သည်နောက်ကွယ်မှတံခါးတို့ကိုပိတ်။ (ထိုအခါအသက်ရှင်ဖြစ်ကြပြီးကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောခံရကြလိမ့်မည်) ဒေါသအမျက်အားဖြင့်လွန်ပြီသည်အထိ, ခဏကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝှက်ထားမည်။ အကြောင်းမူကားသခင်ဘုရားသည်ကိုကြည့်ရှုသည်မိမိတို့အပြစ်အဘို့မြေကြီးတပြင်မြို့သားအပြစ်ပေးဖို့ကသူ့အရပျမှထှကျလာသညျ။ (ဘုရားသခအမျက်တော်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်မပြုခဲ့ပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်)
မိမိခမည်းတော်၏အိမျ၌အကြောင်းကိုသညျယရှေုဆွေးနွေးပွဲများစွာကိုခန်းရှိရာ 2-3, သူသည်ငါတို့အဘို့အရာအရပျပွငျဆငျဖို့သွားခဲ့ကွောငျး: ဒါဟာအစယောဟန် 14 ရည်ညွှန်းကပ်လျက်ပါပဲ။ "ဤအရပ်သို့တက်လာကြ" နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရားသည်ငါတို့အဘို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးအရပျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ် -: အဆိုပါညီလာခံတွင်ယောဟနျသဗြာအတွက်ကြားသောတူညီသောအသံကိုကြားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကသူ့အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့သွားကြဖို့ရှိသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်ကတံခါးကိုပိတ်ပါလိမ့်မယ်။ လည်းဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မူသော - ကြောင့်မိမိတို့အပြစ်အဘို့မြေကြီးတပြင်မြို့သားအပြစ်ပေးဖို့ကသူ့အရပျမှ, ထာဝရဘုရားကိုဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ။
ခုနှစ်တွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4စာအုပ်၏အစအဦး, ငါတို့ကျမ်းစာထဲမှာမတိုင်မီကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြည့်ဆည်း။ ဒါဟာယခင်ကအခြားသုံးယောဟနျသမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်မြင်ကြလျက်ရှိသည်သယ်ဆောင်ထက်အနာဂတ္တိကျမ်းပေမယ့်ယခင်ကခန့်မှန်းကဤလူအစုအဝေးအဘယ်သူအားမျှရှိခဲ့သည်။ 4th: ကျဟရှောယကျဟရှောယအခန်း 6. ယေဇကျေလယေဇကျေလအခနျးကွီး 1 & 10 မှာသူတို့ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့သလဲ, ဒံယလေကအခန်း 7. လည်းသူတို့ကိုမမွငျအတွက်ဒါဟာငါဗြာဒိတျ4၌ဘုရားသခင်၏ရာဇပလ္လင်ပတ်လည်မှာထိုင်စဉ်းစား 24 အကွီးအကဲမြားဖွစျပါသညျသူတို့ကိုမွငျလြှငျ
ဤသည်မှာလူအစုအဝေး, အရှင်မတိုင်မီပေးခြင်းမရှိပေ, ဒါပေမယ့်ယခုတစ်သမိုင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုရှုထောင့်ကနေအသငျးတျောကိုကိုယ်စားပြုသောခုနစ်ပါးသောအသင်းတော်များပြီးနောက်, ငါတို့သညျကောငျးကငျဘုံ၌သူတို့ကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ဟာဘုရားသခင်၏ရာဇပလ္လင်ဝန်းကျင်အရပ်ဌာန၌ရှိကြ၏ မတိုင်မီ အဆိုပါဘေးဒဏ်ကြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာသူတို့ရဲ့စတင်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါက 24 အသက်ကြီးသောသူတို့သည်ဘေးဒဏ်ကြီးက၎င်း၏စတင်ရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီအရပ်၌ရှိသောပီတိဘုရားကျောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သူတို့အုပျစိုးအဖြစ်ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင် 24 အကွီးအကဲမြား။ ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရားကိုကူညီခြင်းနှင့်ကူညီနိုင်အောင်သူတို့က, ဘုရားသခငျ၏ရာဇပလ္လင်ပတ်လည်မှာထိုင်။ သူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပြုထိုင်။ သူတို့rättfärdigjordaဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သူတို့ကအဖြူကိုဝတ်ဆင်နေကြသည်။ မိမိတို့အဝတ်ကို၎င်းရပ်ကွက်နှင့်ယေရှုရဲ့အဝတ်ကဲ့သို့တူညီသောအရာ Himation ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသရဖူ (ဖာနို) ဝတ်ဆင်ဒါကြောင့်သူတို့ရှင်ဘုရင်များကိုလည်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစပရိသတ်တို့အားအဆင်သင့် allusion နေသောအကွီးအကဲမြားဟုခေါ်ကြသည်။
ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဗြာဒိတျ5အတွက်သီချင်းförlöstasသီခငျြးဆိုအဖြစ် sjungar: 9-10:
" သင်သည်အသေခံလေပြီခဲ့ကြသည်များအတွက်သင်, စာလိပ်ကိုယူနှင့်၎င်း၏ဖျံဖွင့်ခံထိုက်ပေ၏, သင်၏အသွေးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတမျိုးနှင့်ဘာသာစကားနှင့်လူများနှင့်လူမြိုးထဲကဘုရားသခငျသညျ (ကျွန်တော်တို့) အတွက်ယောက်ျားဝယ်ယူခဲ့သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့ (ကျွန်တော်တို့) ကတော်ဝင်အတွင်းပိုင်း (ဘုရငျမြား) ရန်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ, သူတို့က (ကျွန်ုပ်တို့သည်) သည်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံပါလိမ့်မယ်။
S က ဤမျှလောက်များစွာသောကြိမ်လျှင်, စာသားကိုစနစ်တကျမူရင်းစာသားထဲမှဘာသာပြန်ထားသောမပေးပါ။ ဂျိမ်းဘုရင်, အခြားဘာသာအကြားမယ့်အစားပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အများကိန်းထိုင်လျက်ခဲ့သည်။ 24 အသက်ကြီးသူတို့လိုဝတ်ဆင်သောရွေးနှုတ်တော်မူဘုရားကျောင်းနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်သူတို့လိုယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း, ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမစတင်မှီရာအရပျ၌ရှိကြ၏။
V ကို အရှင်ထဲမှာမြေကြီးတပြင်ရွှေ့မည်ကြောင်းအဆုံးအချိန်ကွောစီရငျခွငျးငှါကြွလာသည့်အခါသခင်ဘုရားသည်အချိန်နှင့်နေရာအရပ်နှစ်ဦးစလုံးထံမှသူ၏အသငျးတျောရွှေ့မည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကမျြးစာကိုအများကြီးဥပမာများနှင့်စံပြတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်ပါ။
သူကလာမယ့်အမျက်တော်မှနေဖြင့်လွန်ပြီမညျးတျော၏အိမျတျော၌အကြှနျုပျတို့ကိုနှုကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲမည်။ ကျနော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဘာသာရပ်ပရိသတ်အဘို့မဟုတ်ပါဘူးကတည်းကဒီလောကလွန်သွားရကြလိမ့်မည်သောအရာထဲကနေထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့ကတိပေး။ ကျနော်တို့အန္တိခရစ်အဘို့အဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမြတ်သောဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏မင်္ဂလာမျှော်လင့်ချက်ဘုန်းအသရေ၌ထင်ရှားကြလတံ့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်မဟုတ်။ (တိတု 3: 4) သူလာရန်ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏တဲ့သူ။ (1:10 Th 1)
: D et ဤသူကားငါသညျယရှေုမတိုင်မီ 70 သို့သွားရာလမ်းကိုသူ၏အသငျးတျော fetch နှင့်နှစ်ပေါင်းနောက်ဆုံးအပတ်ကလိမ့်မယ်အမည်ရကြောင်း, ထို Pre-trib အယူဝါဒများအတွက်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်ရေးနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတရားစီရင်ပိုင်ထွက်ကျော်တတ်သောတတိယ Post ဖြစ်ပါတယ် မြေကြီးတပြင်။
ဦး သညျယရှေုပြန်လာ၏ display ကိုအစဉ်အမြဲငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ထားပါတယ်, လူ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ဦးကိုရှေးခယျြမျိုးဆက်၏စိတ်ကူးအသေခံမြည်းစမ်းမည်မဟုတ်ပေမယ့်အစားအသွင်ပြောင်းခံရဖို့ကတွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ယရှေုအားဖွငျ့သူ၏အသငျးတျောစုဆောင်းရန်ကြွလာသောအခါဖြစ်ပျက် မိုဃ်းကောင်းကင်ကမှသူတို့ကိုအသကျရှငျနှုတ်ရန်။
: D ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာခေါင်းစဉ်စေသည် et, နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုကြှနျုပျတို့သညျဤအနာဂတ်ပြီးစီးဆီသို့ဦးတည်ဦးတည်, ယေရှု၏အရှင်ပြန်လာဖြစ်ကြောင်းအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မပြောတတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
လူအတော်များများသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံးမြင်အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအားဖြင့်လွှမ်းလျက်ရှိသည်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အဆင်သင့်ရဖို့ဘုရားသခင်နှင့်လူမျိုး၏နှလုံးသားများများ၏ဘုရားကျောင်းရှင်းလင်းစွာပြောတတ်ပါတယ်။ ကြောင်းဆက်သွယ်မှုအတွက်, ထို့နောက်လူတွေရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ချဉ်းကပ်ကြောင်းကြည့်ရှုရန်စတင်, လာမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တကယ်အခိုက်ဖြစ်ပေါ် uppryckelsens ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျသောအခါအပါသလဲ
E ကို ကျနော်တို့ကပီတိဖြစ်ပေါ်မြျှောလငျ့နိုငျသောအခါအဎများစွာသောလူယေရှု၏ပြန်လာနှင့် ဆက်စပ်. သူတို့ကိုယ်သူတို့မမေးသောမေးခွန်းများကိုအချို့သည်ပါသလဲ အဆိုပါညီလာခံတွင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်နည်း အတိအကျဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အန္တိခရစ်သို့မဟုတျယရှေုကဘာလဲ, ငါတို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်သလဲ ယေရှု၏ပြန်လာနှင့်အတူတူပင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များ၏ပီတိဖြစ်သနည်း
ငါသည်ဤ post ကိုများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးစလုံးငါမေးခွန်းများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်အဖြေရေးထားပြီကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။
T က reviously ငါယေရှုသည်ရှေးဦးစွာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ပီတိနှင့်ယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာတူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်မိမိအစီရင်စုနယ် retrieve လိမ့်မည်ဟုတော်တော်လေးယုံကြည်ခဲ့သည်။ ယရှေုသညျသာပြန်လာပြောတတ်, ဣသရေလအမျိုးနှင့်ဤကမ္ဘာတွင်နှစ်ဦးစလုံးဆင်းရဲခံရသောအခါအဘယ်ကြောင့်အသငျးတျောကဆငျးရဲဒုက်ခအနေဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်သင့်သလဲ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အများအပြားအရပ်တွင်တွေ့မြင်တော၏ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏တစ်ဦးလိုအပ်သောသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
ငါကနဦးငါကမျြးစာတှငျဖတျရှုနိုငျသောအရာကိုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးမရနိုငျသောအခြို့သောအဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေခဲ့သောအခါမူကား, ငါသည်စနစ်တကျမေးခွန်းများကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတင်သွင်းမှုများငါနှင့်အတူတက် လာ. အဘယ်အရာကို၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ငါသည်ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းယနေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ်သကဲ့သို့သေချာကြောင့်ပရိသတ်ပီတိဘို့အချိန်အမှတ်ကြွလာသောအခါငါသည်လည်းဖြစ်၏။ ယရှေုသညျနှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ရှေ့တော်၌မိမိအသငျးတျောသညျနှုတျပယျပါမညျနှင့် 70 အပတ်ကစတင်များနှင့်ကျွန်မအလွန်အမင်းထိုသို့ပြောသောထင်သောအငြင်းပွားမှုများအချို့ကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။
ယောဟန် 14: 1-3 - သင့်နှလုံးနှောငျ့ရှကျမရကြကုန်အံ့။ ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်။ ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌နေအများအပြားအခန်းပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါမဟုတ်ကြလျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုငါနေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါသွားသငျသညျပွောပွီမလဲ ထိုအခါငါ သွား. သင်တို့နေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်မှန်လျှင်, ငါပြန်လာကြလိမ့်မည်နှင့်ငါရှိရာသငျသညျဖွစျနိုငျသနိုင်အောင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသငျသညျယူ
1 သက်သာလောနိတ် 4: 15-17 - ငါတို့သည်အသက်ရှင်ရကြ၏နှင့်သခင်ဘုရားကြွလာရန်ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏တားဆီးရမည်မဟုတ်ကြောင်း, သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ။ လာသောအခါကြီးသော command ကို, ထိုကောင်းကင်တမန်မင်းဘုရားသခငျ၏ Trump ၏စကားသံကိုအဘို့, သခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းကင်ကနေဆင်းရလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၏သာသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါအသက်ရှင်ဖြစ်ကြပြီးကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောခံရကြလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်, သခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိရကြမည်
ဦး ppryckelsen ယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာဘို့အခြားအမည်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျယရှေု၏ပြန်လာကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်သူ့မြင်နိုင်ပြန်လာမှာပီတိနှင့်အဆုံးနှင့်အတူစတင်အဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဦး ppryckelsen သတိပေးမပါဘဲဖြစ်ပေါ်တဲ့မမြင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဘာဖြစ်သွားသည့်အခါအတော်လေးပိုင်ခွင့်မရတစ်နည်းအတွက်သိနှင့်ကျွန်တော်စောင့်နှင့်ဆုတောငျးဖြစ်ပြောနေကြသည်။ ကျနော်တို့ပီတိ ပတ်သက်. အချိန်ကိုသိနှင့်ကကျုံ့စတင်သည်သည့်အခါတစ်ဦးနားလည်မှုရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ်နာရီနှင့်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်. ဘာမှမသိရပါဘူး, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်နေ့တိုင်အောင်ဝှက်ထားလိမ့်မည်။
ယရှေုသညျအာကာသအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကမ္ဘာမြေမှတစ်ဝက်လာလျှင်, သူသည်အဘယ်မှာရှိကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ဘို့ထို့နောက်ကောင်းကင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ယူပါ။ ယရှေုသညျပီတိပြီးနောက်ကမ္ဘာမြေဆက်လက်ဖူးဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်အစားများမှာဘယ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကိုယူရှိခဲ့လျှင်။ သို့သော်ဆရာယောဟနျရှိသညျအတိုငျး, သူသည်သူမိမိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မညျးတျော၏အိမျတျော၌သူသည်, ဘယ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကိုရရှိရန်ပြန်လာပါသည်။
J ကို မြင်နိုင်ပြန်လာလာမမြင်ရတဲ့သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိဖြစ်ပါတယ် esu ။ အားလုံးမျက်စိကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်, သူသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးအပေါ်အပြည့်အဝမမြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ တစ်နေ့တာ၏အချိန်ပြီးတော့ကျနော်တို့အစောပိုင်းသူကိုချက်ချင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးအပြီးလိမ့်မည်ကိုသိ, ဒါမှမဟုတ်ပဲ 3.5 နှစ်ပေါင်းကြီးတွေဒုက္ခပြီးနောက်မှာလည်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။
P ကို aulus ကြောင့်ကြောင်းအလေးပေး "သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့် သူသည်ပီတိနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသွန်သင်သည့်အခါ" ။
ပထမဦးစွာ 1 သက်သာလောနိတ်အဒေီ 51 အကြောင်းကိုရှင်ပေါလုကရေးသားခဲ့သည်, ပေါလုဤစာရေးသားခဲ့သည်သည့်အခါဖြစ်ကောင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းသေးအချိန်အမှတ်မှာသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အသငျသညျရိုးရိုးအခြားအသက်ရှင်လျက်ကြွလာစဉ်ယရှေု, သေခြင်းမှပေါ်ထွန်းသောသူအချို့၏ပြောတတ်ရှိရာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာယေရှု၏အဘယ်သူမျှသင်ကြားမှုမိုဃ်းတိမ်၌သူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။
ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့အ OT ထဲမှာမြင်စေခြင်းငှါဂတိတော်အပေါ်အခြေခံပြီး, သေခြင်းမှသာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဟောပြောကြ၏။ အဲဒီမှာသန့်ရှင်းချက်ချင်းကြီးစွာသောဒုက္ခ (ဒံယေလ 12: 2) အပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကတိထားတော်နှင့်ရုံထောင်စုနှစ်မီ။ ဒါဟာဘဝရဲ့သို့မဟုတ်အရှင်သူတော်စင် GT ကိုပိုငျဆိုငျသောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုခေါ်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသညျယရှေုဖြစ်ပါတယ်။
1 ကောရိန်သု 15: 51-52 - ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သင်တို့ကိုငါနက်နဲသောအရာတခုကိုပြောပြ: ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးခဲ့သည့်တံပိုးမှုတ်သောအခါ, မျက်စိတမှိတ်၌, ခဏ၌, ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရကြလိမ့်မည်။ တံပိုးမြည်ရလိမ့်မည်နှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်မပျက်စီးနိုင်သောထမြောက်တော်မူခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု, ကြှနျုပျတို့ကိုပြောင်းလဲရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား,
: D et သူတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်စကားများသို့မဟုတ်သခင်ဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်မှတဆင့်ရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့သညျပေါလုသည်ထိုသွယ်ဝိုက်လုပ်ဖို့အသင်းတော်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦးဆောငျဆိုလိုသည်။
ရှင်ပေါလုသည်ဤသဘောဆောငျနှင့်ထင်ရှားသို့မဟုတ်လူသိများဖူးသောလျှို့ဝှက်ချက်ကရှေးခယျြမျိုးဆက်သေဆုံးမည်မဟုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်သေလွန်သောသူတို့သည်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားပါလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် မိုဃ်းကောင်းကင်၌ယရှေုသညျ။
ယောဟန် 14: ။ ။ 1-3 "- စိတ်နှလုံးမနှောငျ့ရှကျပါစေဘုရားသခင်၌ယုံနဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌နေအများအပြားခန်းများမှာဒါမဟုတ်ကြလျှင်, ငါငါအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါသွားသငျသညျပွောပွီလိမ့်မယ်။ သင်တို့အဘို့အလောနဲ့ငါ သွား. သင်တို့နေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်မှန်လျှင်, ငါပြန်လာကြလိမ့်မည်နှင့်ငါရှိရာသငျသညျဖွစျနိုငျသနိုင်အောင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသငျသညျယူပါ။ ငါသွားလေရာရာ၌, သငျသညျကိုငါသိ၏။ သင်သိသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ "
ခုနှစ်တွင် ဂျွန်ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း, ယရှေုကိုထူးခြားတဲ့ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ သူကဘယ်ပရောဖက်မျှမယခင်ကရှိခဲ့သို့မဟုတ်အလားအလာရှိခဲ့ဘူးသောအရာတစ်ခုခုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်မေရှိယကိုလာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမြေကြီးယေရုရှလင်မြို့၌သူတော်စင်စုဆောင်းရန်ကြောင်းဖတ်နိုင်သူသွားလိမ့်မယ်ရှိရာနေရာတစ်ခုတည်းဖြစ်သောခမည်းတော်ရဲ့အိမျမှသူတို့ကိုယူလိမ့်မယ်။
သူဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပေးသည်သောအခါ, "အဲဒီ၏အခြေခံပေါ်မှာ ငါပြန်လာကြလိမ့်မည်နှင့်ငါရှိရာသငျသညျဖွစျနိုငျသနိုင်အောင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသငျသညျယူပါ။ " သူကလုပ်ဖို့ဂျူးလွတ်မြောက်မှုကိုနှင့်အတူတစ်တစ်ကျော့ပြန်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပြောနေတာ, ဒါမှမဟုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောသူ၏နိုင်ငံကိုတည်ထောင်, ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ရန်။ ထိုသို့သာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချမှတ်ခြင်းစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယောဟန် 14: 1-3 နဲ့ 1 Th 4: 13-18
: D ကျွန်တော်စကားတော်သို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများအချို့နီးပါးတူညီနေကြသည်ရှိရာအဲဒီနှစျခုကျမ်းပိုဒ်ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကဒီမှာအံ့သြဖွယ်မျဉ်းပြိုင်ကြသည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလာအမိန့်၌၎င်း, အပိုင်းအစဆောက်လုပ်ထားသောလမ်းအတွက်, တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားလိုက်နာပါ။
ယောဟန် 14: 1-3 1 Th 4: 13-18
း 1 စိုးရိမ်ပူပန် v.13 ထင်းရူး
း 1 v.14 သလားယုံကြည်
း 1 ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ v.14
v.2 v.15 သင်ပြောပြသငျသညျကိုပြောသည်
v.3 သခင်ဘုရားကြွလာ v.15 ပြန်လာ
v.3 သင့်ရဲ့ V.17 တက်နှုတ်ယူ
သခင်ဘုရားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်မကို V.17 v.3
ငါ V.17 အမြဲသခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှာ v.3 ဖြစ်လိမ့်မည်။
18 Pre-trib အငြင်းအခုံ
2. ဘေးဒဏ်ကြီး "ယာကုပ်၏ဒုက္ခ" (Jer30: 7) လို့ခေါ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် "အသငျးတျောသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဒုက္ခဆင်းရဲ" ဟုခေါ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
3. အိန်ဂျယ်ဂါဗြေလ 70 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်တော်၏လူ (ယုဒလူတို့) အပျေါမှာကိုယျတျောသန့်ရှင်းသောမြို့တော် (ဂျေရုဆလင်) အပေါ်သို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ဒံယေလကိုကြွေးကြော်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မပေးပါ။ ဒန် 9:24
4. ညီလာခံပထမဦးဆုံး 69 ပတ်ကြာမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်, သူ, နောက်ဆုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် 70 အပတ်ကလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဗြာဒိတျပီတိခုနှစ်တွင် 5. အခန်း4မှာဖြစ်ပေါ်: ဆငျးရဲဒုက်ခကာလဖြစ်သော 1 အခန်း 6-19 အားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အသငျးတျောကိုကိုယ်စားပြု 24 အကွီးအကဲမြားကိုပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုကျိုးသည်ကိုမပြုမီရာအရပျ၌တည်ရှိ၏။
6. အဆိုပါညီလာခံတွင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ပထမသုံးအခန်းကြီးထဲမှာနှစ်ဆယ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခန်းကြီး4နဲ့ 19 အကြားဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
7. အဆိုပါကြီးစွာသောဒုက္ခကာလမှာလည်း (ဇေ 1:15) မှာ "အမျက်ဒေါသနေ့" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ကျမ်းစာထဲမှာ, ဒါပေမယ့်ယရှေုသညျအမျက်တော်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ (1 Th 5: 9), ဒါပေမယ့် (1:10 Th 1) "ဒေါသအမျက်" မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်
8. ဘေးဒဏ်ကြီးအချိန်ကမျြးစာကို (ဇေ 1:15) တွင်သခင်ဘုရား၏နေ့တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် 1 သက်သာလောနိတ် 5: 2-3 သခင်ဘုရားကို (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း) ၏နေ့ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကလူ (မယုံကြည်သူများ) ဟုပြောသည့်အခါ "ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး," ထို့နောက်အဖြစ်ရုတ်တရက်နာကျင်မှုကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမဖြတ်ပြီးလာ, သူတို့သည် (ထိုမယုံကြည်သူများ) မှလွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်အဖြစ်ယူဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အတူ (မယုံကြည်သူများ) ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့သည်ကားကွုံတှေ့မညျဖွစျကွောငျးတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကသစ္စာရှိပါဝင်သည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတျကွောငျးထငျရှားသညျ။
9. ကျနော်တို့ပီတိ (1 သက်သာလောနိတ် 4:18) ၏ဆွေးနွေးချက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှစ်သိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း domstid အပေါငျးတို့သဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဒေသနာ၌အဘယ်သူမျှမနှစ်သိမ့်ရှိပါသည်။
10. ယရှေုကို "လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်သို့ရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်ထဲကသင်တို့အားကယ်နှုတ်။ " ဟုသူကယင်းဘုရားကျောင်းကိုထိန်းသိမ်းစေချင်ကြောင်း Philadelphia တွင်မှာဘုရားကျောင်းကတိထားတော်နှင့် (ဗျာ 3:10) ဘုရားသခထဲကသစ်စာရှိတဲ့အသငျးတျောသညျထိနျးသိမျးဖို့ကတိပေးခဲ့ ဆငျးရဲဒုက်ခကာလ။
11. ဧနောက်သည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုမီကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခဲ့ပါတယ်နှင့်နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်သကဲ့သို့စည်းဝေးပွဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ raptured ပါလိမ့်မည်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးကျန်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
လောတဝေးမြို့မှမီဘုရားသခင်သည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်နိုင်ဘူးဖြောင့်မတ်သွားပြီမီ, ဘုရားသခင်ကဤလောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်မရနိုငျသောနညျးတူခုနှစ်တွင် 12 ။ (1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 19:16)
သူကမေးမြန်းသောအခါ 13. ယရှေုသညျဆငျးရဲဒုက်ခကာလ၏မိနျ့တျောမူ၏။ "Vaka အမြဲလာရန်နှင့်လူသားကိုရှေ့တော်၌ရပ်မှခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမှလွတ်မြောက်ရန်အစှမျးသတ်တိဘို့ဆုတောင်းကြလော့" (လုကာ 21:36) ယေရှုသူကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုမေးတယ်မသဘာဝကျပါတယ်။
14. မာလခိ 3:18 သခင်ဘုရား (ဆိုက်ရောက်အပေါ်) ကပြောပါတယ်ဘုရားသခငျကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်သူ့ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မဟုတ်သူကိုတဦးတည်းအကြားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မတရားသောသူတို့မူကားအကြားခြားနားချက်ပြပါလိမ့်မယ်။ pre-trib ပြီးတော့ကျနော်တို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မတရားသောအကြားစစ်ကြောစီရင်တော်မူဖို့သူ့ကိုနှင့်အတူလာ, သခင်ဘုရားသည်သူ၏အသငျးတျောကစုဆောင်းရန်ကြွလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အဆိုပါပီတိမှာ 15 ယရှေုသညျကွှလာ ဘို့ သူသည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးတွင်ကြွလာသောအခါ, သူလာ: (16-17 1 သက်သာလောနိတ် 4) သူ့ဘုရားကျောင်း နှင့်အတူ သူ၏အသငျးတျော။ (3:13 Th 1) ။
ရန်သညျယရှေုကိုဖိတ်ကြားသောခုနစ်ပါးသောအသင်းတော်များမှစာလုံးခုနှစ်တွင် 16 "ဝိညာဉ်တော်ကအသငျးတျောတို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်ကိုနားထောင်လော့။ " ဘေးထွက်ထိုင်နေကြ၏မှသို့သော်အသင်းတော်၌ကြီးစွာသောဒုက္ခ, သောနောညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောထဲမှာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်: "နားကိုသူကြားပါစေ" (ဗျာဒိတ် 13း9) သူဟာညီလာခံ omits, ပြောတတ်ဝိညာဉျတျောကိုနားထောငျဖို့မဘုရားကျောင်းအရပ်၌နှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်သွားလို။
17. အန္တိခရစ်သည်သန့်ရှင်းသူနှင့်အတူစစ်အောင်, သူတို့အနိုင်ယူဖို့ပါဝါရပါလိမ့်မယ်။ (Rev 13: 7) ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ၏ပြောပြီမြို့နယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် "helvets ဆိပ်ကမ်းများအားကြီးသောပရိသတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်။ " ဟုကတိပြုထားသည် (မဿဲ 16:18)
ဒါကြောင့်တက်ဖြောင့်နှင့်သင့်ဦးခေါင်းတော်ကိုချီကြောင့် "ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို (ထိုနိမိတ်လက္ခဏာများ), ဖြစ်ပျက်မှစတင်သည်တဲ့အခါမှာ" "ဒီအဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါ," ထို့နောက်တက်ဖြောင့်နှင့်သင့်ဦးခေါင်းတော်ကိုချီ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ: 18 ယရှေုသညျမပြောခဲ့ပါဘူး သင်တို့ကိုရွေးနှုတ်။ (လုကာ 21:28) ။
S က ကျွန်မအတူတူပြောနေတာနှစ်ခုကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ထို GT ကိုနှင့် NT ရွေးကောက်သဖြင့်, အသင်းတော်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်, ဒါမှမဟုတ်ဆငျးရဲဒုက်ခဖြတ်သန်းသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေခံငါနှစ်ခုအောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ထောက်ပြချင်တောင်ကုန်း:
1 သက်သာလောနိတ် 1: 9-10 - သူတို့အကြှနျုပျတို့သညျ၏လက်ခံရရှိခဲ့သည်နှငျ့သငျတျောမူသောဘုရားသခငျ, လူနေမှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့နဲ့ကောင်းကင်ကနေမိမိသားတော်စောင့်ရုပ်တုတို့ကိုကြဉ်ဘုရားသခင်အားလှည့်ပုံကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုအဆိုပါ လာသောဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောအသေကောင်, ယရှေုကနေကြီးပြင်းလာ
ဟေရှာယ 26: 19-21 - သို့သော်လည်းသင်တို့အသေကောင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်, သူတို့အလောင်းတွေထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ နိုးထနှင့်မနာသီချင်းဆို, မွမှေုနျ့၌နထေိုငျကြောင်း, သင်တို့သည်သင့်ရဲ့နှင်းဘို့အလငျး၏တစ်ဦးနှင်းဖြစ်ပါတယ်, မြေကြီးသေလွန်သောသူတို့သည်အထဲကငါပေးမည်။ ငါ၏လူတို့လာကြနှင့်သင်၏အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့သွားပါကသင်သည်နောက်ကွယ်မှတံခါးတို့ကိုပိတ်။ အမျက်တော်အားဖြင့်လွန်ပြီသည်အထိခဏများအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝှက်ထားမည်။ ကြည့်ရှုလော့, ထာဝရဘုရားသည်မိမိတို့အပြစ်အဘို့မြေကြီးတပြင်မြို့သားအပြစ်ပေးဖို့မိမိနေရာမှထွက်ကြွလာ။ မြေကြီးတပြင်သူတို့အသွေးအကြွေးတွေကိုဘှားမွငျ တင်. မရှိတော့သေခံရသောသူတို့နှင့်လွှဲမည်။
V ကို ကျဟရှောယထံမှဤကျမ်းပိုဒ်အစဉ်အဆက်မတိုင်မီပွညျ့စုံခဲ့ကြပြီမမြင်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ရှေ့တော်၌ထိုဘေးဒဏ်ကြီးပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်နှင့်မည်မဟုတ်ကိုသိသော 2: ဒါဟာအစညျယရှေုဟောပြောကြောင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူသဘောတူပါဘူးနဲ့ Daniel ဒန် 12 ပြောပြသည်။
"K သည် အမှန်တကယ်" ပျောက်ဆုံး "ကိုဆိုလိုသည်သို့မဟုတ်" မမြင်ရတဲ့ဖြစ်လာသည် "သောငါ၏လူဦးအကြောင်းကို," ယောဟန်၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အပြိုင်သောသူမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတစ်ခုဖွင့်လှစ်တံခါးကိုကိုမြင်လျှင်ဘယ်မှာဗြာဒိတျအခနျးကွီး4အတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏စကားသံကိုကြား တံပိုးခအလားတူ said: "ဒီမှာတက်လာကြ။ " ချက်ချင်းဘုရားသခငျသညျနောကျ, အအေးယောဟနျသသူသညျကောငျးကငျမှဆငျးရဲဒုက်ခကိုကြည့်ရှုသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်မှချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြစ်လာမွကွေီးပျေါမှာထွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
ယောဟနျသ uppryckelsens နေ့၌အတူတူတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်ဒီဘုရားကျောင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ command တစ်ခု, ထိုကောင်းကင်တမန်မင်း၏အသံနှင့်ဘုရားသခင်၏ Trump မှတဆင့်, ပရိသတ်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားမည်ဖြစ်ပြီးဆငျးရဲဒုက်ခကိုမွကွေီးဆက်ရေးမြင်လိမ့်မည်။
ဗြာဒိတျ 3:10 - သင်ခံနိုင်ရည်အကြောင်းကိုငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းနှင့်စုံစမ်းရာကာလတွင်ထံမှသင်တို့ကိုကယ်တင်, လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်သို့ရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်လိမ့်မယ်
J ကို esaja ၏ပြောသော "သခင်သည်မိမိတို့အပြစ်အဘို့မြေကြီးတပြင်မြို့သားအပြစ်ပေးဖို့ကသူ့အရပျမှထှကျလာသညျ။ " အလားတူပင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သည့်သွေးဆောင်မှု၏နာရီ (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း), စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏ကလူထားရန်ကြောင်းကိုဗြာဒိတျ 3:10 အတည်ပြု။
ယင်းဘေးဒဏ်ကြီးများ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျဟရှောယနှငျ့ဗြာဒိတျနှစ်ဦးစလုံးဆွေးနွေးပွဲကိုညျဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်ကိုခေါ်တစ်ခုခုမှတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်များကိုအပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ကြိုးစားကြနှင့်မြေကြီးမြို့သားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမျက်တော်အားဖြင့်လွန်ပြီသည်အထိသခင်ဘုရားအားဖြင့်ဤကျမ်းပိုဒ်နှစ်ဦးစလုံးကျနော်တို့အနေဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသက်သေခံသောတူညီသောအမျက်ဒေါသ, သူ့အခန်းတို့မှအိမ်, သူ့ခမညျးတျော၏အိမျတျောမှအိမ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုသည်။
အို မီတာကျနော်တို့အနေနဲ့စမ်းသပ်မှုပြုပါနှင့်သူ၏လက်၌ရှိသောကမျြးစာနှင့်အတူတစ်ကန္တာရကျွန်းပေါ်တွင်လူတထားပေမယ့် Exposition နှင့်အယူဝါဒအတွေးအခေါ်များပြဌာန်းနိုင်ဘူး။ အဘယ်အရာကိုနိဂုံးချုပ်သူကပီတိများအတွက်အချိန်အမှတ်လေးစားမှုနှင့်အတူနိဂုံးမှလာခဲ့သလဲ
သမ္မာကျမ်းစာကသခင်ဘုရား၏နေ့အဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာကြောက်မက်ဘွယ်သော domstid မှတဆင့်အမျက်တော်သွန်းခြင်းဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အပြစ်၏မြေကြီးကိုတရားစီရင်မယ်လို့ 9-13 နှင့်အာမုတ် 5:18: ပထမဦးဆုံးသူကကျဟရှောယ 13 ကနေလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ဟေရှာယ 13: 9-13 - ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်တပြည်လုံးကိုဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ရှိနထေိုငျသူသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကိုဖကျြဆီး တင်. ရန်, အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်အပြင်းစွာအမျက်နှင့်အတူ, ကြောက်မက်ဘွယ်သောလာပါတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၏ကြယ်နက္ခတ်ပိုမိုင်း၏အလင်းတင်ပို့ကြပါဘူး။ နေရောင်မှောင်မိုက်ထ, လရဲ့အလင်းအပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါက၎င်း၏မကောင်းသောအဘို့မိမိတို့အပြစ်ကြောင့်မတရားသောသူတို့သညျကမ်ဘာအပြစ်ပေးမည်။ ငါ stoltas bravado စေခြင်းနှင့်အာဏာရှင်မာနထောင်လွှားဆင်းခေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါဩဖိရရွှေထက်လူကိုပိုပြီးရှားပါး, ရွှေစင်ထက်လူကိုပိုပြီးရှားပါးပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်ငါမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုတုန်လှုပ်စေမည်, မြေကြီးယိမ်းနှင့်သူ၏မီးလောင်ရာဒေါသအမျက်ဗိုလ်ခြေအရှင်မကျေနပ်မှု၏ထာဝရဘုရားကိုသူများဖြစ်သောယင်း၏အုတ်မြစ်ကိုလှုပ်ရန်။
အာမုတ် 5:18 - ယဟောဝါ၏နေ့အဘို့အတောင့်သောသူတို့အဖို့မင်္ဂလာရှိ၏ သင်ကတောငျ့အဘယ်ကြောင့်နည်း သခင်ဘုရား၏နေ့အလင်းသည်မှောင်မိုက်သည် ဖြစ်. , မ။
, G eNom ထို့နောက်မဿဲအခန်းကြီး 24 တွင်ဖတ်ရှုသူစီရင်ချက်ချအချိန်သခင်ဘုရားကိုနိဂုံးချုပ်မဟုတ်လျှင်မကလူ့ရှင်သန်မှုလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလေးအနက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြင်နေရတယ်။ အဲဒီအစား, သခင်ဘုရား၏တန်ခိုးကိုပြန်ကဤမြေကြီးသို့ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့်ဤသူ domstid အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ သူသညျယရှေုပြန်လာသေးဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းသိ, ဒါသည့်အခါသူသည်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်တစ်နေရာရာအနာဂတျမှာပဲသိတယ်။
သူက 1 သက် 9-10 ဆီသို့ရောက် လာ. , ဒါကြောင့်သူကတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြေညာချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အခါ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်သောသူသည်ယေရှုအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးနှင့်လာရန်ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
1 သက်သာလောနိတ် 1: 9-10 - သူတို့ငါတို့သည်သင်တို့၏လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်နှငျ့သငျတျောမူသောဘုရားသခငျ, လူနေမှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့နဲ့ကောင်းကင်ကနေမိမိသားတော်စောင့်ရုပ်တုတို့ကိုကြဉ်ဘုရားသခင်အားလှည့်ဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုအဆိုပါ လာသောဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောအသေကောင်, ယရှေုကနေကြီးပြင်း။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက် (တို့သည်): - လာမယ့်ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောသူသညျယရှေုကိုသူသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကောင်းကင်ကနေသားတော်စောင့် ..and ။
, G သူသည်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ကမျြးစာကိုဖတ်ရှုဖို့ eNom "သူကား, အဘယျသို့အဘယ်မှာရှိသနည်း, အခါအဘယ်ကြောင့်။ " အဘယ်သူသည် (ယရှေု) အဘ (အဘယ်သူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်ချွေတာ), ရသောအခါ (ထိုအမျက်ဒေါသ၏အချိန်) ။ 1 သက်သာလောနိတ်4မှာနောက်ထပ်ဖတ်နေ by: 15-17, သူက "လူတိုင်း" မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖို့မြေကြီးမှကြောင်းကိုဖတ်နိုင်, 1 သက်သာလောနိတ်5မှာ: ငါတို့သည်ခံရလတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖတ်ရသောအခါတုံ့အဘယ်ကြောင့်9ဟုမေးခဲ့သည် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို, ဒါပေမယ့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်။
1 သက်သာလောနိတ် 5:9- ဘုရားသခင့ဒေါသအမျက်ကိုခံရဖို့ကိုအကိုခနျ့အပျမပြုခဲ့ပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်သည်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက် (တဖန်): ဘုရားသခငျသညျအမျက်တော်မှကျွန်တော်တို့ကိုခနျ့အပျထားတော်မူသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရယူနိုင်ဖို့
V ကို ur ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြောင်းအချို့မဟုတ်သကဲ့သို့, သူထို့ကြောင့်ပီတိအစားကကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်၏တူညီသောအချိန်-အမှတ်အကြောင်းကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ထိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ပီတိဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာသူတို့ရဲ့စတင်ရသူမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ဖြစ်ပေါ်ဖို့alltståပါလိမ့်မယ်။
မကြာခဏ Post-trib မေးခွန်းများကိုမေးသော်အဖြေ
M က မှန်မှန်လိမ့်မယ်မကြာခဏအငြင်းပွားမှုများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ပီတိကိုယုံကြည်ကြဘူးသူတွေကိုထံမှမေးခွန်းများကို ed ။ ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
"သမ္မာကျမ်းစာနှစ်ခုထွန်းစရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုသင်ပေးမထားဘူး။ သင်ဘယ်လိုသညျယရှေုနှစ်ကြိမ်လာမညျဖွစျကွောငျးပွောနိုငျသလဲ "
အဖြေ: တူညီသောလမ်းအတွက်ပဲကလိုပဲမေရှိယကိုနှစျယောကျကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်း (ဆင်းရဲဒုက္ခကျွန်ဘုရင်) တွင်ရှိပါသည်ယေရှုပြန်လာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ပုံများကိုရှိပါတယ်အတူတကွရရန်ခက်ခဲသည်။ အဲဒီနှစျခုပာပီတိနှင့်ယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျယရှေုကို '' ပြန်လာသည့်ပီတိစတင်သည်ဘယ်မှာအဆင့်ဆင့်၌ပြစ်မှားမိသည်, ယရှေုသညျ '' ဟုပွောနိုငျမြင်နိုင်ပြန်လာပါကအဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များသည်။
"ယရှေုသညျပီတိချက်ချင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက် (မဿဲ 24: 29-31) အရပျကိုယူမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ သူကရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုမစုဆောင်းရန်ကောင်းကင်တမန်များပို့ပေးသည့်အခါ"
အဖြေ: အဆိုပါချီဆောင်ခြင်းပေါင်းများစွာအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဿဲအခန်းကြီး 24 ဖြစ်ပေါ်ပါဘူး:
အဆိုပါပီတိမှာတက်မြန်းသည့်နေ့များအရှိန်အဟုန်မှာပဲသညျယရှေုကိုကိုယုံကြည်သူများဘုန်းအသရေအလောင်းတွေကိုကောင်းကင်တမန်၏အကူအညီမပါဘဲလုပျနိုငျရမယျ။ ကျနော်တို့ကအလောင်းကောင်၏ဘုန်းအသရေလှည့်ကျသောအခါငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်, ထိုပီတိမှာကောင်းကင်တမန်များ၏အကူအညီလိုအပ်မလဲ
ကောင်းကင်တမန်သည်လည်းဤအချိန်အမှတ် (: 38-43, 49-50 မဿဲ 13) မှာorättfärdiaအတူတူစုသိမ်း
တဦးတည်းကောင်းကင်တမန်မဿဲ 24 အတွင်းယုံကြည်သူများစုဆောင်းနေသည် upprycklsen ကြောင်းပြောပါတယ် အကယ်. Matt 13 ထိုနည်းတူအဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။ မဿဲ 13 တှငျကြှနျုပျတို့ကမတရားသောအမှုဖြစ်၏ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာတွေ့မြင်ဖြောင့်မတ်ပထမဦးဆုံးနှင့်မကမ္ဘာမြေကနေဝေးလည်းကျိုးလိမ့်မည်။
ကောင်းကင်တမန်တို့အတူတကွ 1000 နှစ်ကနိုငျငံတျောသညျရှေ့တျော၌သညျယရှေုကိုစီရင်ခံရဖို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မတရားသောနှစ်ဦးစလုံးကိုစုသိမ်းရန်စေလွှတ်နေကြသည်။ ဤလူများသည်ထိုဖြောင့်မတ် 1000 နှစ်ကနိုင်ငံတော်ကိုအမွေသေးပါဘူးခွင့်ပြုနေစဉ်မတရားသောသူတို့မူကား, မီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်နေကြသည်ရှိရာ၎င်းတို့၏သဘာဝအကောင်များအတွက်ဖြစ်ကြသည်။
မဿဲ 24 အတွက်ယေရှု၏ပြန်လာ
မဿဲ 24:31 - ကြီးသောတံပိုးခေါ်ဆိုခနှင့်အတူလူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုပေးပို့စေလွှတ်ရမည်, သူတို့ကောင်းကင်ဘုံ၏တဦးတည်းအဆုံးကနေအခြားငှါ, လေးခု Cardinal အချက်များမှသူ၏ရွေးကောက်စုဝေးစေမည်။
M က 24 မှယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ဤလောကသို့ကွှလာဖော်ပြသောအခန်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရနျသူတို့ကိုတရားဆုံး၌၎င်း, မေရှိယနိုငျငံကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏပြုလုပ်အသငျးတျောကပြောဆိုထားရာအခနျးငယျ 31, ခုနှစ်တွင်ရှေးခယျြဖို့ညွှန်ပြ။ ငါကရွေးကောက်ယုဒလူတို့အပိုင်းအကြောင်းကြောင်းအတော်လေးရှင်းပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ပင်မဿဲ 24:31 စပ်လျဉ်းအောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကိုရောက်စေဖို့ကြိုးစားပါ:
ကျဟရှောယ 11:11 - ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိလက်ဆန့ ်. , တစ်ဖန်ထိုအခြိနျမှာဖွစျလိမျ့မညျ ကိုမိမိတို့အဘို့မိမိလူအကျန်အကြွင်းကိုဆည်းပူးနိုင်ရန်အတွက် , အာရှုရိ, အီဂျစ်, သရုအရပ်၌, အီသီယိုးပီး, ဧလံ, ရှိနာဟာမတ်များနှင့်တကျွန်းတနိုင်ငံကနေဘာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီ ။
ဟရှောယ 11း12 သူတပါးအမြိုးသားအဘို့အလံကိုထူနှင့်လေးထောင့်ကနေဣသရေလအမျိုးနှင့်ယုဒအမျိုးကွဲပြား၏အဝေးသို့နှင်လိုက်သောစုဝေးစေမည်။
B က Anner နှင့်တံပိုးကိုလူများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုတက်သင်္ကေတ။ မရှိသံသယရှိသူတို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်အတူတူပင်စွဲလမ်းဖြစ်တယ်, ဘုရားသခငျကဆင့်ခေါ်နေသောအစ္စရေး၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကြောင်းကိုဟရှောယမိန့်တော်မူ၏။ ရွေးကောက်သည့်ဘေးဒဏ်ကြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူသစ္စာစောင့်သောယုဒလူတို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချိန်, မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကျော်ကွဲပြားလျက်ရှိသော။ အားလုံးယုဒလူတို့သည် GTs ပရောဖက်ပြုသောစကားဖြင့်အပြည့်အဝအညီလည်းဖြစ်သော, အိမ်ပြန်မယ်။ ဒါဟာကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်ဘုရားကျောင်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ငါတို့သည်ဤလောက (gr.thlipsis) တွင်ကြုံတွေ့ရယေဘုယျဆငျးရဲဒုက်ခနှငျ့ယရှေုမဿဲ 24 ၌ပွောသောကျွန်တော်ကြီးစွာသောဒုက္ခ (gr.Thlipsis Mega) တွင်ကြုံတွေ့ရဆင်းရဲဒုက္ခအကြားကွဲပြားခြားနားသွားသဖြင့်စတင်ရမည်ဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါနှင့်: အဖြေ ဒံယလေသအခန်းကြီး 12
pre-trib အယူဝါဒညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်လွတ်မည်ဟုယုံကြည်သူများအပေါ်ထွက်မသွားဘူး။ ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့သညျမိမိကို ထောက်. (ယောဟန် 15:18) အတွက်ဤလောကတှငျမုန်းကြလိမ့်မည်ကြောင်းဟောပြောကြ၏။ ကမ်ဘာပျေါတှငျစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူများ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတိပကတိအထွဋ်အမြတ်, လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစစ်တိုက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားများအတွက်ခံစားနေရပြီး။ ဆငျးရဲဒုက်ခမြိုးသညျယရှေုကျနော်တို့ကနေအခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုကတိထားတော်ဘူး။ ကျနော်တို့ကဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်ကြုံတွေ့ရအမျက်တော် ထွက်. ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားသို့မဟုတ်ဖြတ်သန်းသွားစရာမလိုပေကိုကတိထားတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခုကိုတစ်ခုခုပါပဲ။ (1 Th 5: 8)
"ပေါလု2သက်သာလောနိတ်2မှာ says: 1-9 ထိုအန္တိခရစ်ပေါ်လာပါရှေ့တော်၌ထိုပီတိဖြစ်ပေါ်မ"
အဖြေ: ပေါလုသည်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည် ဆက်စပ်. အတွက်ပီတိပြောတတ်သောယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာ enstydig မဟုတ်ပါဘူး။ သခင်ဘုရား၏နေ့ 24 နာရီ betydningen အတွက်တစ်ခုတည်းသောနေ့ရက်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဤလောကသို့ထွက်ဝင်ကြောင်းတရားစီရင်တဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူး။ (2:12 Is, 13: 6, ယေဇကျေလ 13: 5, ယောလ 1:15 အာမုတ် 5: 18,20)
သက်သာလောနိတ်အတွက်ဘုရားကျောင်းကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်သူတို့ပြီးသားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကာလအတွင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့မှုကိုပြေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရှေ့တော်၌ထိုအန္တိခရစ်ပထမဦးဆုံးထုတ်ဖော်ပြသရပါမည်ပြောထားသည်။ အန္တိခရစ်စတင်လာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးကိုသစ္စာတော်ကိုအနှစ်, ဒါမှမဟုတ်ဆငျးရဲဒုက်ခ၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကစတင်ခဲ့သည်။
ပင်တေကုတ္တေမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏သှနျးလောငျးရှေ့မှာလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြကလူဖြစ်ခဲ့သည်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လူတို့အားထင်ရှားလေ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပင်တေကုတ္တေမှာသွန်းလောင်းသောအခါ, ငါတို့မြေကြီးပေါ်မှာ "ဒုတိယ" သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောကြဘူး။ ရုံဓမ်မဟောငျးကမျြး၌ရှိသကဲ့သို့, လူဦးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ညီလေး, အထက်မှအောက်ခြေ၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရသောဒုက္ခအတွင်းမှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Post ကို-trib အယူဝါဒမှမေးခွန်းလွှာ
S က အဆိုပါ Post ကို-trib အယူဝါဒတစ်ခုလျော်သောရှင်းပြချက်ဖြေကြားသို့မဟုတ်ပေးရန်ခက်ခဲကြောင်းအချို့အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ် amtidigt:
ချီဆောင်ခြင်းကယေရှုရဲ့မှာပထမဦးဆုံးလာနေလျှင်မြင်နိုင်ထို့နောက်ထောင်စုနှစ် populate တော်မူလိမ့်မည်ငှါလာသလော
သင်ရုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် "ဟုအဆိုပါထောင်စုနှစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလက်ခံရရှိ, နှင့်ပီတိအခါထောင်စုနှစ်အားလုံးကိုလူများအစဉ်အမြဲအလောင်းလှည့်ကြမှမူအရ်၏လာသညျယရှေုမြင်နိုင်မှာပထမဦးဆုံးလာပါတယ်။ အဆိုပါမျိုးပွားမှသာသဘာဝကအလောင်းတွေအတွက်လူများကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သောအခါမူကားအဘယ်သူသည်ထို့နောက် "ထောင်စုနှစ် populate ကြမည်နည်း
အဖြေ: ဒါဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစဉ်အတွင်းပီတိပြီးနောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်သူတွေကိုအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ လူတို့သညျမိမိတို့၏သဘာဝကအလောင်းတွေအတွက်ထောင်စုနှစ်သို့သွားပါ။
11-23 သို့မဟုတ်အရာအခန်းကြီး 14: အဘယ်ကြောင့်ပီတိဗြာဒိတျ 19 တွင်ဖော်ပြထားသောမဟုတ်ပါသလဲ?
"ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 19 တှငျကြှနျုပျတို့သညျယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာ၏ဖော်ပြချက်အရပေမယ့်တကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပီတိမဖော်ပြထားတယ်။ Zech 14: 1-7 လည်းဒီအဖြစ်အပျက်ဖော်ပြထားတယ်, ဒါပေမယ့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရှိရာ။ ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 19 တွင်သို့မဟုတ်အရာအခန်းကြီး 14 မဖော်ပြခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးလူသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသမိုင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအဖြစ်အပျက်၏တသည်မဟုတ်လော အဘယ်ကြောင့်နည်း "
သို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်: အဘယ်သူသည် (30,41,49 မဿဲ 13) ကိုမတရား, ပထမစုဆောင်းခံရကြလိမ့်မည်နည်း (1 သက်4း 16-17)
နှစ်ဦးစလုံး 1 သက်သာလောနိတ်နှင့်မဿဲ 13 သက်ဆိုင်ရာရှင်ပြန်ထမြောက်ပထမနေရာယူကပြောပါတယ်။ 1 သက်သာလောနိတ်အသငျးတျော၏uppståendelsenပြောထားသည်ပထမဦးဆုံးလာပေမယ့်, Matt 13 ပထမဦးဆုံးမတရားသောမြေမှခေါ်ဆောင်သွားငါသိမြင်၏။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများနေ့ကဖယ်ရှားခံရဖို့ပထမဦးဆုံးမဖြစ်နိုင်သလဲ
အဖြေ: ရိုးရှင်းစွာတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်မနှစ်ခုကိုသီးခြားဖြစ်ရပ်များရှိပါသည် ။
ချီဆောင်ခြင်းရာအရပျကိုယူထားပြီးလျှင်ပင်: အကယ်တင်ခြင်းသို့ချီဆောင်ခြင်း (ခရစ်တော်ရဲ့တရားရုံး) မှာသရဖူနှင့်အတူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုမည်သို့ကြောင့် 24 အကွီးအကဲမြားပြီးသားသူတို့ကို (4-10 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 4) ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်?
အဘယ်ကြောင့်သူတို့အား၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ကွဲကွာဖြစ်လာသိုးနှင့်ဆိတ်ထားပြီးပီတိဖြစ်ဘူးပြီနည်း (မဿဲ 25: 31-33)
အဖြေ: ပီတိနဲ့အတူထောင်စုနှစ်မတိုင်မီခွဲ (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိလူများကျန်ရစ်သူ) ယေရှု၏မြင်နိုင်ပြန်လာမှာဖြစ်ပေါ်ဒါသိုးနှင့်ဆိတ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။
အဘယ်မှာရှိကြောင်းကနေအားလုံးကို "မသိမ်းရသေးသော" ဟုအဆိုပါထောင်စုနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြမည်နည်း (Rev 20: 7-10)
အဖြေ: ထောင်စုနှစ်ကာလအတွင်းမွေးဖွားခဲ့သူတွေကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သဘာဝအလျောက်အလောင်းတွေအတွက်ထောင်စုနှစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသောသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏။
သူသည်ကောင်းကင်၌ယုံကြည်သူများနေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပြီးတော့သူသည်အဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယူပြန်လာလိမ့်မည်ဟု: 1-3 သညျယရှေုယောဟန် 14 ခုနှစ်တွင်ကတိပြုခဲ့သည်။ pre-trib ယရှေုသညျအသငျးတျောနှငျ့အတူရှိနစေခြင်းငှါမြေကြီးသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယေရှုအဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ငါတို့အဘို့နေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမယ်လို့ပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယူမဟုတျလော
အဖြေ: 1-3: Post ကို-trib အယူဝါဒယောဟန် 14 ရှင်းပြဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်
လုကာ 4: 18-19 - သူသည်ဆင်းရဲသောသူတို့အားသတင်းကောင်းဟောပြောဖို့ငါ့ကိုဘိသိက်ခံသောကြောင့် "သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်, ငါ့အပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏သူငှါ, သိမ်းယူခဲ့သောနှင့်မျက်စိကန်းသောမျက်မှောက်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လွတ်လပ်မှုကြွေးကြော်မှငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထာဝရဘုရား၏လက်ခံနိုင်ဖွယ်တစ်နှစ်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောလွတ်လပ်မှုနှင့်ကြွေးကြော်
E ကို 1-2 နှင့်ဤစကားသည်ဟုတ်မှန်သောရောက်ကြောင်းကိုကွှေးကျွော: ယရှေုသညျတော၌စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်နောက်တော်သို့လိုက်သူဟေရှာယ 61 မှဖတ်ဘယ်မှာနာဇရက်မြို့သား, ထံသို့ရောက်လာကြ၏။ ကိုသတိပြုမိရန်အရာသညျယရှေုဟေရှာယတစ်ခုလုံးကိုအနာဂတ္တိဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဝါကျရပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
15: 13-18 - "ညီအစ်ကိုတို့, ငါ့စကားကိုနားထောင်ရှိမောင်ဘုရားသခငျသညျပထမဦးဆုံးသူကတပါးအမျိုးသားတို့တွင်သည်မိမိနာမအဘို့လူတွေကိုအနိုင်ရသွားသေချာလုပ်ပုံကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်ဒါဟာပြောပါတယ်သောပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ကိုက်ညီသည်: ထိုအခါငါပြန်လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ။ နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်, ဒါဝိဒ်သည်ငါပြန်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်၎င်း၏အပျက်အယွင်း။ နေသောပြိုလဲရဲ့, ငါကတက်ထားမည်
: D et ကိုအသင်းတော်နှစ်ပေါင်း၏ 70 နောက်ဆုံးအပတ်ကအပေါ် raptured ပါလိမ့်မည်သည့်အခြားဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ 70 တစ်ပတ်မူလတန်းအကြောင်းမရှိကျနော်တို့ဒံယလေ 9:24 အတွက်မြင်သောဣသရေလအမျိုးသားတို့အားခြောက်လကတိတော်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ညျအသငျးတျောထို့နောက်မတိုင်မီသွားပြီလိမ့်မည်။ ယာကုပ်အမျိုးကိုတမန်တော် 15, ဆင့်ကဲကမ်ဘာပျေါမှာညီလာခံအချိန်ပြီးနောက်, ထာဝရဘုရားသည်မိမိအာရုံကိုဖွင့်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အတူ၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဟုသက်သေခံ၏။ ပီတိသခင်ဘုရားကိုယရှေု၏မြင်နိုင်ပြန်လာဣသရေလအမျိုးနှင့်အသင်းတော်အဘို့အကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များရှိပါတယ်ထက်သီးခြားအချိန်အမှတ်မှာပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
တစ်နည်းအားဆငျးရဲဒုက်ခ, နှစ်ခု shared ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဣသရေလအမျိုးကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှါ၎င်း, ဒုတိယ, မဖကျြဆီးနှင့်အကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်လူမျိုးတို့နှင့်တကွထအောင်။ (ယေ 30: 1-11) ။ အသငျးတျောက, ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပိုင်ပါဘူး။
ဗြာဒိတျ 11:15 - သတ္တမကောင်းကင်တမန်သည် မိမိအတံပိုးမှုတ် ။ ထိုအခါကပြောပါတယ်သူကောင်းကင်ပြာအားကောင်းတဲ့အသံထဲမှာကြားရလေ၏။ "ကမ္ဘာ၏နိုငျငံတျောသညျယခုငါတို့သခင်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏ပိုငျဆိုငျ, သူသည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလိမ့်မည်"
အီး ဎတချို့ကပီတိနှင့်နောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်သောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကျနော်တို့ကဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်ကြုံတွေ့ရ7နှင့်နောက်ဆုံးတံပိုးကဲ့သို့တူညီသောကြောင်းပြောကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်ပြန်ထမှပိုင်ဆိုင်သည်လွန်ခဲ့သောတံပိုးနှင့်အတူဗြာဒိတျ 11:15 အတွက်ခုနစ်လုံးကိုတံပိုးရှုပ်ထွေးမပြုရပါ။
ပထမဦးစွာဘာသာရပ်နှင့်ညျဘုရားသခငျ၏တံပိုးကယ်တင်ရာတံပိုးအခါကဤနှစ်ခုကိုတံပိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကွာခြားချက်ရှိပါတယ်, ငါတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွက်ကြုံတွေ့ရခုနစ်လုံးကိုတံပိုးမတူဘဲ၌ဤကမ္ဘာ၏တရားသဖြင့်စီရင်သည်။ ဘုရားသခငျ၏ Trump ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှသကျမှေးလုပျငနျး၎င်း, ဘုရားသခင်၏လူတို့အစုဝေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲတွင်တံပိုးများတွင်မှုတ်, ထာဝရဘုရားမဟုတ်ဘဲကောင်းကင်တမန်သည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်တမန်သည်တံပိုးမှုတ်သောအခါ, ကြီးစွာသောဒုက္ခစတင်မယ့် signal ကိုဖွင့်လျက်, နောက်ဆုံး 3.5 နှစ်ပေါင်းစတင်ကြပေမည်။ ဘုရားသခငျ၏တံပိုးမှုတ်သောအခါ, သတ္တမတံပိုးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များဖြန့်ချိစဉ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, ဒါကြောင့်သာအဓိကဖြစ်ရပ် transmutes ။
1 သက်သာလောနိတ် 5:2- အချိန်ကာလနှင့်ရာသီ, ညီအစ်ကိုတို့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ဆီသို့ရေးသားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်သည်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာအလွန်ကောင်းစွာသိကြ၏။ လူများ, ပြောနေကြသောအခါ "ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး," ထို့နောက်သူတို့အဖြစ်ရုတ်တရက်နာကျင်မှုကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမဖြတ်ပြီးလာ, သူတို့သည်လွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်အဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုခံရ၏။ သင်တို့မူကား, ညီအစ်ကိုတို့, ထိုနေ့ရက်သည်သူခိုးကဲ့သို့သင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမည်အကြောင်း, မှောင်မိုက်၌မရှိကြပေ။
M က ရေနွေးငွေ့ကလူကျူးလွန်အခါသညျယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးတွင်ရာအရပ်ကိုကြာသည့် 24 နာရီတစ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တိကျသောနေ့, အဖြစ်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရှင်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်နှင့်ပီတိပြောရလျှင်ဖြစ်ကြပြီးတဦးတည်းအပေါ်ထွက်ဝင်ဆိုလို။
ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးကိုးကားကျမ်းပိုဒ်ရုံ 1 သက်သာလောနိတ် 5: 2, သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်နှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ပီတိဖျောပွထားတဲ့။ ယရှေုသညျသင်မကြာခဏအဲဒီနှစျခုဖြစ်ရပ်များရှုပ်ထွေးချိတ်ဆက်တဲ့ "ညဉ့်အခါသူခိုး" အဖြစ်လာတူညီသောလမ်းအတွက်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်အဖြစ်။
သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား၏နေ့ဖျောပွထားတဲ့အချို့ bivelverser ၏သုံးသပ်ချက်ကသာတစ်ခုတည်းသောနေ့ရက်ကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ဘေးဒဏ်ကြီး, ယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာလျက်ထောင်စုနှစ်နှစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်တော်မမူကြောင်းပြသထားတယ်။
ယောလ 2: 11-20 - သခင်ဘုရား၏နေ့များစွာကိုကျွန်တော်ယေဇကျေလ 38-39 အတွင်းတွေ့မြင်အတူတူတိုက်ခိုက်ယုံကြည်ရသောမြောက်ဘက်ကနေရန်သူကနေတိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည်။ အတော်များများကဂေါဂ / မာဂေါဂစစ်ပွဲဘေးဒဏ်ကြီး၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုအတွင်းဖြစ်ပေါ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ယောလ 3:4- ဤတွင်ယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာလျက်တပါးအမြိုးသားအပေါ်တရားစီရင်တော်မူရန်ချည်ထားသခင်ဘုရား၏နေ့ဖြစ်၏။
2 ပေတရု 3: 10-23 - ဤတွင်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်နေ့ကိုကောင်းကင်အလောင်းတွေဖျက်သိမ်းပါလိမ့်မည်, ကြှနျုပျတို့အင်ပါယာ၏ 1000 နှစ်အကြာတွင်သစ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်ပထမနေရာအတွက်မြေကြီးသစ်အရသိရသညျယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာရည်ညွှန်းလို့မရပါဘူး။
4 - ထိုအခါငါကိုရာဇပလ္လင်ကိုမွငျလြှငျ, သူတို့သည်တရားစီရင်တော်မူရန်အခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်သူတို့ကိုပေါ်မှာထိုင်: ဗြာဒိတျ 20 ။ ထိုအခါငါသူတို့သညျယရှေု၏သက်သေခံခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောမဟုတ်နှင့်နဖူးသို့မဟုတ်လက်အပေါ်သူ၏အမှတ်အသားပေးခံခဲ့မိသောကြောင့်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သောအသက်ဝိညာဉ်ကိုငါသိမြင်၏။ သူတို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့အနှစ်တထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံလေ၏။ အနှစ်တထောင်ကိုလက်စသတ်မှီတိုင်အောင်သို့သော်သေလွန်သောသူတို့သည်၏ကျန်နောက်တဖန်မနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်။
: Dဗြာဒိတျ 20 အတွင်းပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း:4ကိုလည်းနောက်ကျောနှင့်ထွက်အများကြီးဆွေးနွေးမှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ဖတ်ရသောအခါသမ္မာကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုယ်တိုင်ကအဘို့ဟောပြောသောထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ပြောတတ်သောကျမ်းပိုဒ်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ထိုသို့ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်။ ထိုအခါမှသာကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ကို၎င်း, အာဇာနည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောပြောပွဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရှိသေး၏။ ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေအာဇာနည်ပါဝင်ပါသည်နိုင်အောင်ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတယ်? အဘယ်သူမျှမ၏သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။
: D ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အမျိုးအစားအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အသက်ပြန်ရှင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူတစ်ထာဝရအသက်ကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏မပါဘဲတစ်ဦးထာမှဒုတိယရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံး။ ဘုရားသခင်ထံမှသောထာဝရခွဲခြာဖြစ်သည့်အဆုံးစွန်သောရှင်ပြန်ထ, အားလုံးအချိန်ကာလကနေသေလွန်သောသူတို့သည်အားလုံးအဆီးအတားများရေးစပ်ခြင်း, အင်ပါယာ၏ 1000 နှစ်အကြာတွင်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ (Rev 20: 5)
ဘုရားသခင်နှင့်အတူထာဝရအသက်ကိုရညီမျှသောပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်နေရာကြာပါသည်။ အဆိုပါ NT တှငျကြှနျုပျတို့အားလုံးအမျိုးအစားအောက်တွင်အတွက်လာအတော်ကြာကွဲပြားခြားနားသောအသက်ပြန်ရှင် "ပထမထမြောက်ခြင်း" ကိုကြည့်ပါ။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ 1. ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နာကျင်မှုအပေါငျးတို့သအုန်းအုန်းသဲသဲများအတွက်အသင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူလုနီးပါး 2000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့၏အပြစ် ပြန်. မမူလျှင်, ငါတို့သည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခဲ့ဘူး။ ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုငါ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်။
2. ဟေဗြဲ 11:35 tid.- GL ဓမ္မတချို့လူတွေ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
3rd ယေရှု၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း GL ဓမ်မမှယုံကြည်သူများ။ Matt 27: 52-53
နောက်ဆုံးအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်အဘို့အနှစ် 70 ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီ 4th ခရစ်ယာန်ညီလာခံပီတိ။
5. ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးမှာသက်သေခံနှစ်ပါး၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း - 11:12 Up ကို
ဖွင့်ဣသရေလအမျိုး၏နိုငျငံတျော၏ပွနျလညျထူထောငျရှေ့တှငျအရပျကိုယူသော GL ဓမ္မယုံကြည်သူများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏သက်သေခံတို့၏ 6. ရှင်ပြန်ထ။ 4: - Up ကို 20 ဒန် 12:13, ယောဟန် 11:24,
M က ယေရှု၏ပြန်လာနှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရစဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်နေရာယူသောဖြစ်ရပ်များ၏အခိုးအငွေ့ကစည်းဝေးပွဲများ၏ပီတိအကြားယာယီကွာဟမှုနှငျ့ယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာဘို့လိုအပ်သောကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြသပါ။ ဤအကြံပြုသောဖြစ်ရပ်များထဲကတချို့ဟာ:
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကောင်းမကောင်း, တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းသူသည်ဤဘဝ၌ပြုတော်မူပြီအဘယ်အရာကိုခံယူစေခြင်းငှါ, ခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြမည်များအတွက် -2ကောရိန္သု 5:10
, G uds စကားလုံးကြှနျုပျတို့အားလုံးတနေ့ခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်တော်ရှေ့သို့ရောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ကိုများအတွက်räkenskabစေမည်ကိုသင်ပေးတယ်။ အဆိုပါရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်အင်ပါယာ၏ 1000 နှစ်အကြာတွင်ကြီးစွာသောပလ္လင်ဖြူမှာတရားစီရငျခကျြမြားနှငျ့ရောထှေးခံရဖို့မကြောင်းတစ်ဦးကတရားရုံးတွင်။ ဒီတရားရုံးများအတွက်ဂရိစကားလုံး "Bema" ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့် "Beema တရားစီရင်ခြင်းကို" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
1 ကောရိန်သု 4:5- Lower အချိန်မတိုင်မီထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမစစ်ကြောစီရင်ခြင်း, သခင်ဘုရားကြွလာမီ။ သူသည်မှောင်မိုက်ဖုံးကွယ်ထားအဖြစ်ဖွင့််လင်းနှင့်နှလုံးရဲ့အတှေးအချေါနှငျ့ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖေါ်, ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းဘုရားသခင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုခံယူရကြမည်ဟုသငျ့သညျ
ဒါဟာတရားရုံးချက်ချင်းညီလာခံကိုမွကွေီးမှခရစ်တော်နှင့်အတူပြန်လာသည့်အခါသူတို့ပြီးသားမိမိတို့အကျိုးကို modtaga မှခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးသော, ဆိုလိုတာက upprycklsen မှချည်ထားသောသို့ကြာပါသည်။
N က ဒီတရားရုံးကပီတိအထိထုံးဖို့ချက်ချင်းနေရာယူကြောင်းbekräfterအဖြစ်Ågotသည့်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံညီလာခံကိုယ်စားပြု 24 အကွီးအကဲမြားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဦးခေါင်းအပေါ် kroner ၏ဘုရားသခငျ၏ရာဇပလ္လင်ပတ်လည်မှာအရပျ၌ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ယရှေုကိုဗြာဒိတျကျအခနျး6အတွက်ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုချိုးကြောင်းထို့နောက်မီ, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစဉ်အတွင်းသခင်ဘုရား၏အစေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ
အသငျးတျောကိုကိုယ်စားပြု 24 အကွီးအကဲမြားပါကအရာနှစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအခါပီတိနှင့် 70 årsveckansအစအဦးအကြားနှင့်ပထမဦးဆုံးစီရင်ချက်မီနှင့်ပထမဦးဆုံးမြင်းရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်မတိုင်မီလိုအပ်သောအချိန်ပေါ်, ပရိသတ်ကောင်းကင်အတွက်အရပ်၌ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
: D သူကပီတိနဲ့ယေရှု '' မြင်နိုင်ပြန်လာအကြားယာယီကွာဟမှုဘို့မဟုတ်ကြလျှင်တပါးအမျိုးသားတို့၏အတိတ်နိမိတ်မဖြစ်နိုင်တာပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအခြားကယ်တင်နှင့်မသိမ်းရသေးသောမယ်လို့နှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်းတို့၏သဘာဝအအလောင်းတွေဆဲနေသောသစ္စာရှိပြီးသားနှုတ်နှင့်အလောင်းများကို၏ဘုန်းအသရေလှည့်ခဲ့ကြပါလျှင်ကွဲကွာရနိုင်သနည်း
ချီဆောင်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်ရိုးရှင်းစွာထောင်စုနှစ်ရှေ့တော်၌ထိုကြောင့်လူတို့အားဝေရန်မလိုအပ်ရှာပါ။ ယေရှုသည်လည်းသံလွင်တောင်ပေါ်မှာခြေမထားသောအခါကျနော်တို့ထားပြီးပီတိတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက် uppdelining ခဲ့ကြပေသည်။
M က ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစဉ်အတွင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကို EOPLE ထောင်စုနှစ်၎င်းတို့၏သဘာဝအကောင်များသို့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဤလူ, အလုပ်လုပ်ဖို့အိမ်ဆောက်နှင့်ကလေးများရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကထောင်စုနှစ်သို့သွားမီ, နောက်တဖန်မွကွေီးပျေါမှာလူအတော်များများရှိလိမ့်မည်, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးမတူဘဲလာသောအခါလူသည်ဩဖိရရွှေထက်ပိုမိုရှားပါးဖြစ်လိမ့်မည်နည်း (13 Is: 9-12)
ခုနှစ်တွင် ယုဒလူနှင့်တစ်ပါးအမျိုးသားတကိုယ်တည်းဖြစ်လာကြပါပြီရှိရာတစ်ဦးသည်အသက်သည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အတူအ program ကိုဆက်လက်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထိုအချိန်ကာလကွာဟမှုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း၏ 70 နှင့်နောက်ဆုံးအပတ်တွင်သခင်ဘုရားသည်နောက်တဖန်ယုဒလူတို့နှင့်အစ္စရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်အာရုံစိုက်ထားမည်သည့်အခါကာလဖြစ်၏။
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောförsamlingenstid၏အဆုံးသည်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုဒါပေမယ့်လည်းပီတိနှင့်ယေရှုရဲ့မြင်နိုင်ပြန်လာအကြားတစ်ဦးလိုအပ်သောကွာဟမှု၏စကားရပ်သာပြီးဆုံး။ ခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်, 24 အကြီးအကဲတွေ, လူအမျိုးမျိုးတို့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း, ထောင်စုနှစ်၏လူဦးရေနှင့်ဣသရေလအမျိုးအဘို့ထာဝရဘုရား၏အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဤအကြံပြုနှစ်ဦးစလုံး။
V ကို စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်နေထိုင်ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့နှင့်သခင်မကြာမီအိမ်ပြန်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ။ ကျနော်တို့သခင်ဘုရား၏အအေး, ကောင်းကင်တံပိုးများနှင့်ကောင်းကင်တမန်အော်ဟစ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ကျေးဇူးတော်ရှိလိမ့်မည်ဟုရှေးခယျြသောမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်း, ငါ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အတော်လေးအခိုငျအမာဖြစ်၏။
အသငျးတျောကပင်တေကုတ္တေမှာဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခသှနျးလောငျးမှာက၎င်း၏က start တယ်, ပရိသတ်ရဲ့ပီတိတွေနဲ့အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမကြာခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှတျမွောကျခွငျးချဉ်းကပ်ဘို့, ကြှနျုပျတို့ခေါငျးရုတ်သိမ်းပေးရန်မြင့်မားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုက္ခ "ယာကုပ်၏ဒုက္ခ" (Jer30: 7) လို့ခေါ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် "အသငျးတျောသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဒုက္ခဆင်းရဲ" ဟုခေါ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလ 70 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်တော်၏လူ (ယုဒလူတို့) အပျေါမှာကိုယျတျောသန့်ရှင်းသောမြို့တော် (ဂျေရုဆလင်) အပေါ်သို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ဒံယေလကိုကြွေးကြော်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မပေးပါ။ ဒန် 9:24
အဆိုပါဘုရားကျောင်းကိုပထမဦးဆုံး 69 ပတ်ကြာမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်, သူ, နောက်ဆုံးနှင့် 70 ရက်သတ္တပတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆငျးရဲဒုက်ခကာလဖြစ်သော 1 အခန်း 6-19 ဖွငျ့ဖျောပွထားသညျဗြာဒိတျပီတိအခန်း4တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အသငျးတျောကိုကိုယ်စားပြု 24 အကွီးအကဲမြားကိုပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုကျိုးသည်ကိုမပြုမီရာအရပျ၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါစီရင်စုနယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ပထမသုံးအခန်းကြီးထဲမှာနှစ်ဆယ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခန်းကြီး4နဲ့ 19 အကြားဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
ဆငျးရဲဒုက်ခကာလကိုလည်းကျမ်းစာထဲတွင် (ဇေ 1:15) မှာ "အမျက်ဒေါသနေ့" ဟုခေါ်သော်လည်း, ယရှေုသညျအမျက်တော်ခံရဖို့ကိုအကိုခနျ့အပျမပေးခဲ့ပါဘူး။ (1 Th 5: 9), ဒါပေမယ့် (1:10 Th 1) "ဒေါသအမျက်" မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်
ဆငျးရဲဒုက်ခကာလကမျြးစာကို (ဇေ 1:15) တွင်သခင်ဘုရား၏နေ့ဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော် 1 သက်သာလောနိတ် 5: 2-3 သခင်ဘုရားကို (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း) ၏နေ့ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကလူ (မယုံကြည်သူများ) ဟုပြောသည့်အခါ "ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး," ထို့နောက်အဖြစ်ရုတ်တရက်နာကျင်မှုကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမဖြတ်ပြီးလာ, သူတို့သည် (ထိုမယုံကြည်သူများ) မှလွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်အဖြစ်ယူဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အတူ (မယုံကြည်သူများ) ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့သည်ကားကွုံတှေ့မညျဖွစျကွောငျးတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကသစ္စာရှိပါဝင်သည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတျကွောငျးထငျရှားသညျ။
ကျနော်တို့ပီတိ (1 သက်သာလောနိတ် 4:18) ၏ဆွေးနွေးချက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှစ်သိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း domstid အပေါငျးတို့သဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဒေသနာ၌အဘယ်သူမျှမနှစ်သိမ့်ရှိပါသည်။
ယရှေုက "လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်သို့ရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်ထဲကသင်တို့အားကယ်နှုတ်။ " ဟုသူကယင်းဘုရားကျောင်းကိုထိန်းသိမ်းစေချင်ကြောင်း Philadelphia တွင်မှာဘုရားကျောင်းကတိထားတော်နှင့် (ဗျာ 3:10) ဘုရားသခငျသညျဆငျးရဲဒုက်ခကာလထဲကသစ်စာရှိတဲ့အသငျးတျောသညျထိနျးသိမျးဖို့ကတိပေးခဲ့ ။
ဧနောက်သည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုမီကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခဲ့ပါတယ်နှင့်နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်သကဲ့သို့စည်းဝေးပွဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ raptured ပါလိမ့်မည်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးကျန်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ဖြောင့်မတ်သွားပြီမီလောတဝေးမြို့မှမီဘုရားသခင်သည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်နိုင်ဘူးသောတူညီသောလမ်းအတွက်, ဘုရားသခင်ကဤလောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်လို့မရဘူး။ (1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 19:16)
သူကမေးမြန်းသောအခါယရှေုသညျဆငျးရဲဒုက်ခကာလ၏မိနျ့တျောမူ၏။ "Vaka အမြဲလာရန်နှင့်လူသားကိုရှေ့တော်၌ရပ်မှခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမှလွတ်မြောက်ရန်အစှမျးသတ်တိဘို့ဆုတောင်းကြလော့" (လုကာ 21:36) ယေရှုသူကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုမေးတယ်မသဘာဝကျပါတယ်။
မာလခိ 3:18 သခင်ဘုရား (ဆိုက်ရောက်အပေါ်) ဘုရားသခငျကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်သူ့ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မဟုတ်သူကိုတဦးတည်းအကြားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မတရားသောသူတို့မူကားအကြားခြားနားချက်ပြပါလိမ့်မယ်။ ပြောပါတယ် pre-trib ပြီးတော့ကျနော်တို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မတရားသောအကြားစစ်ကြောစီရင်တော်မူဖို့သူ့ကိုနှင့်အတူလာ, သခင်ဘုရားသည်သူ၏အသငျးတျောကစုဆောင်းရန်ကြွလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ချီဆောင်ခြင်းမှာ, ယရှေုကြွလာ ဘို့ သူ့ဘုရားကျောင်း (1 သက်4း 16-17) သူသည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးတွင်ကြွလာသောအခါ, သူလာ နှင့်အတူ သူ၏အသငျးတျော။ (3:13 Th 1) ။
ရန်သညျယရှေုကိုဖိတ်ကြားသောခုနစ်ပါးသောအသင်းတော်များမှစာလုံးထဲမှာ "ဝိညာဉျတျောသညျအသငျးတျောတို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်ကိုနားထောင်လော့။ " ဘေးထွက်ထိုင်နေကြ၏မှသို့သော်အသင်းတော်၌ကြီးစွာသောဒုက္ခ, သောနောညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောထဲမှာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်: "နားကိုသူကြားပါစေ" (ဗျာဒိတ် 13း9) သူဟာညီလာခံ omits, ပြောတတ်ဝိညာဉျတျောကိုနားထောငျဖို့မဘုရားကျောင်းအရပ်၌နှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်သွားလို။
သည်အန္တိခရစ်သည်သန့်ရှင်းသူနှင့်အတူစစ်အောင်, သူတို့အနိုင်ယူဖို့ပါဝါရပါလိမ့်မယ်။ (Rev 13: 7) ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ၏ပြောပြီမြို့နယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် "helvets ဆိပ်ကမ်းများအားကြီးသောပရိသတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်။ " ဟုကတိပြုထားသည် (မဿဲ 16:18)
: D ဗြာဒိတျ 20 အတွင်းပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း:4ကိုလည်းနောက်ကျောနှင့်ထွက်အများကြီးဆွေးနွေးမှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ဖတ်ရသောအခါသမ္မာကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုယ်တိုင်ကအဘို့ဟောပြောသောထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ပြောတတ်သောကျမ်းပိုဒ်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ထိုသို့ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်။ ထိုအခါမှသာကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ကို၎င်း, အာဇာနည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောပြောပွဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရှိသေး၏။ ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေအာဇာနည်ပါဝင်ပါသည်နိုင်အောင်ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတယ်? အဘယ်သူမျှမ၏သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ကယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နာကျင်မှုအပေါငျးတို့သအုန်းအုန်းသဲသဲများအတွက်အသင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူလုနီးပါး 2000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့၏အပြစ် ပြန်. မမူလျှင်, ငါတို့သည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခဲ့ဘူး။ ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုငါ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်။
ဟေဗြဲ 11:35 tid.- GL ဓမ်မအချို့လူများ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှု၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း GL ဓမ်မမှယုံကြည်သူများ။ မဿဲ 27: 52-53
ခရစ်ယာန်ညီလာခံနောက်ဆုံးမတိုင်မီပီတိအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်အဘို့အနှစ် 70 အပတ်က ,.
ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆုံးမှာသက်သေခံနှစ်ပါး၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း - Up ကို 11:12
အဆိုပါ GL ဓမ္မယုံကြည်သူများနှင့်ပဲဣသရေလအမျိုး၏နိုငျငံတျော၏ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းမတိုင်မီရာအရပ်ကိုကြာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏သက်သေခံတို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ 4: - Up ကို 20 ဒန် 12:13, ယောဟန် 11:24,
: D et ဒီစီးရီးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါသည် - ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီယေရှုရဲ့ပြန်လာ, ငါသည်ယခင်ကအောက်ပါပို့စ်များကိုရေးထားပြီဖြစ်သော:
E ကို ကျနော်တို့က Pre-trib အယူဝါဒအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါမကြာခဏဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်သောကိစ္စများ၏ ne - နှစ်ပေါင်း၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရှေ့တော်၌ထိုအသငျးတျောရဲ့ပီတိကြောင်း - ထိခိုက်သော 1800 မှအကျော်ကြား Margeret မက်ဒေါ်နယ်အနာဂတ္တိကတည်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Pre-tribs သမိုင်းပင်ဖြစ်သည် မိမိအဘာသာရေးယောဟန် Darby ။
ကျနော်တို့ပြီးတော့အသစ်တခုအယူဝါဒအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့သည့် Pre-trib အယူဝါဒ, သူသည်ယခင်ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသမိုင်းများကဆုံးမသွန်သင်ကြပြီမဟုတ်စကားပြောသည့်အခါသူတို့မကြာခဏတန်ပြန်အငြင်းအခုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မထင်နှစ်ဦးစလုံးရမှတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။ ဒီ post ကဤကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းများကိုအပေါ်အခြေခံပြီးယူပါလိမ့်မယ်။
E ကို အသုံးအများဆုံး argment ၏ ne အတွက် Pre-trib အယူဝါဒက "ယုံကြည်ဖို့သိပ်အသစ်သောအယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ " အရှင်ဖြစ်ပါသည် သို့သော်ဤအငြင်းအခုံတွေနဲ့တော်တော်များများပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကမျြးစာအဆုံး၏နားလည်မှုအချိန်ပရောဖက်ပြုအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်ထင်ရှားဤဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်များအရပျကိုယူသောအချိန်မတိုင်မီကြသည်မဟုတ်သှဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒံယေလဆုံးအချိန်ကိုထုတ်ဖော်ကြောင်းအချို့ပရောဖက်ပြုတယ်တဲ့အခါ, သူကသူတို့ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးသောထာဝရဘုရားအားတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သခင်ဘုရားကိုဒံယလေ "ဤစကားသည်အချိန်၏အဆုံးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ဝှက်ထားခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်အဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းမှဖြစ်ကြသည်။ " အဲဒီဖြေကြား (ဒံ 12: 9)
N ကို တစ်နည်းဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့သမ္မာကျမ်းစာအနာဂတ္တိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြည့်စုံသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ငါတို့သည်လည်းပရောဖက်ပြုစကားလုံးတစ်ခုလျော်သောနားလည်မှုရ။
ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏သမိုင်းတနေ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေတစ်ဦးညွန့်ပေါင်းနှင့်အတူဣသရေလအမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ရန်မည်ဂေါဂမင်းသား၏ပြောသောအရာယေဇကျေလ 48 ခုနှစ်တွင်အနာဂတ္တိ, နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ရပြီကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ, အစ္စရေးတည်ရှိနှင့်မတည်ရှိပါဘူးတဲ့တိုင်းပြည်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတဲ့အနာဂတ္တိမပေးခဲ့ပါဘူး, ရှုပ်ထွေးမှုများဖန်တီးထားသည်။
သည်အခြားပရောဖက်ပြုချက်နှစ်ခုလုံးကိုကျနော်တို့ရဲ့သမိုင်းမှဒါပေမယ့်လည်းကျနော်တို့မကြာသေးမီရာစုနှစ်များတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသောနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး, ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးသောသူလူတွေကိုနက်နဲသောအရာတခုကိုပါပြီရမည်ဟုတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ဘယ်လိုတစျခုကသူတို့သေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံး, လောကဓာတ်လုံးကိုအားဖြင့်မျက်မြင်ခံရဖို့ဘယ်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း 11 ၏သက်သေခံနှစ်ပါးကိုရှင်းပြနိုင်မည်နည်း သို့မဟုတ်အသက်ရှင်လျက်လာဝါကွှားစကားလုံးများကိုပွောသောတိရစ္ဆာန်၏ပုံရိပ်ကို?
: D ပရောဖက်ပြုစကားလုံးများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကျနော်တို့က၎င်း၏ပြီးစီးတွေ့မြင်သည်အထိအနက်ကိုဘော်ပြမှဝှက်ထားသောနှင့်ခက်ခဲခဲ့ et တကယ်တော့, ဘုရားကျောင်းသမိုင်းတာသွင်ပြင်လက္ခဏာမူကြောင်းကိုအရာဖွစျသညျ။
ယခုနှစ် 430 စီအီး၌တည်၏။ မိမိအအရေးပါဆုံးနှင့်အ inflytelsesrika အကျင့်ကိုကျင့်၏တစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဘုရားကျောင်းဖခင်သြဂတ်ရဲ့စာအုပ်စီးရီး "ဘုရားသခင်၏စီးတီး" ရေးသားခဲ့သူ။ သြဂတ်ဝိညာဉ်ရေးရာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုနှင့်ထောင်စုနှစ် (ထောင်စုနှစ်) ပြီးသားစတင်နေပြီခဲ့ကြောင်းနှင့်ယေရှုရဲ့ဒုတိယလာမယ့်သည်အထိဆက်လက်မယ်လို့စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။